အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ် ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ် ၂၀၁၅	56
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ် ၂၀၁၅
Posted by kai on Aug 4, 2015 in Myanmar Gazette, News | 56 comments
Photo: Barack Obama announces plans to cut emissions from US power plants. (Reuters: Jonathan Ernst) Related Story: Australia’s climate change position leaves others scratching their heads: Al Gore
Related Story: Clinton unveils ambitious first-term renewable energy target
US president Barack Obama has announced the first ever limits on US power plant emissions and declared climate change the greatest threat facing the world.
“No challenge posesagreater threat to our future and future generations thanachange in climate,” Mr Obama said as he unveiled his administration’s ramped-up plan to cut carbon emissions from power plants.
“There is suchathing as being too late.
Audio: No Plan B: Obama announces aggressive climate change action (AM) “Most of the time, the issues we deal with are ones that are temporally bound and we can anticipate things getting better if we plug away at it, even incrementally.
“But this is one of those rare issues, because of its magnitude, because of its scope, that if we don’t get it right, we may not be able to reverse. And we may not be able to adapt sufficiently.”
Subscribe to get ABC News delivered to your email, including top environment coverage, plus the day’s main news and analysis and alerts on major breaking stories.
Asastep to try to adapt, Mr Obama announced power plant owners must cut carbon dioxide emissions by 32 per cent from 2005 levels by 2030.
Electric power plants account for about 40 per cent of US emissions of carbon dioxide, the most common greenhouse gas that contributes to climate change.
Mr Obama described the move as “the single most important step America has ever taken in the fight against global climate change”.
He rejected criticism that his plan would increase energy bills for Americans, hurt the poor, and cost jobs.
Analysis by the ABC’s Ben Knight
He talked about the American clean air act which has been around for decades, which is now the reason why you can actually tolerate walking or running around places like Los Angeles.
He talked about the environmental regulations that had been brought in over the years to stop things like acid rain, to take lead out of the environment and out of the atmosphere.
As it stands at the moment in the US, power plants, energy producing, electricity producer power plants face no restrictions on the amount of carbon that they are allowed to put into the atmosphere.
So this changes that. For the first time there are restrictions. It’s quite aggressive action that he’s taken.
Mr Obama has made it clear he is going to use these regulations to put pressure on other countries, including Australia who, he has indirectly already called to account for perceived lack of action. So here is how he says America is going to lead the world.
Later this August, Mr Obama will visit the Arctic state of Alaska to highlight the impact of climate change.
“Our fellow Americans have already seen their communities devastated by melting ice and rising oceans,” Mr Obama said.
And in December, representatives from around the world will gather in Paris to hash out rules designed to limit global temperature increases to two degrees Celsius.
EU commissioner for climate action Miguel Arias Canete hailed Mr Obama’s clean power plan as “a positive step” to cut carbon emissions ahead of the Paris summit.
“The clean power plan isapositive step forward in the genuine efforts of the United States to cut its emissions,” Mr Canete tweeted.
New measures criticised as ‘overreach and heavy-handed’
However, Mr Obama’s invocations got short shrift from the Republican-controlled Congress, which described the measures as “overreach” and “heavy-handed”.
In its initial proposalayear ago, the Obama administration had set the carbon emissions cut from the power sector at 30 per cent.
“Not only will these massive regulations fail to meaningfully affect the global climate, but they could actually end up harming the environment by outsourcing energy production to countries with poor environmental records like India and China,” Mr McConnell said.
The leader of the House of Representatives Kevin McCarthy accused Obama of choosinga“green legacy overagrowing economy”.
Industry lobby group the American Coalition for Clean Coal Electricity previewed likely legal action, saying Mr Obama’s administration was “pursuing an illegal plan that will drive up electricity costs and put people out of work”.
We only get one home. We only get one planet. There’s no ‘plan B’.
Accusing detractors of “scaremongering,” Mr Obama insisted suggestions of higher electricity costs, power shortages andadamaged economy would prove incorrect.
“When president (Richard) Nixon decided to do something about the smog that was choking our cities, they warned that it would ruin the auto industry. It didn’t happen,” Mr Obama said.
“In 1990, when Republican president George H W Bush decided to do something about acid rains, (they) said electricity bills would go up, lights would go off. It didn’t happen.
“We only get one home. We only get one planet. There’s no ‘plan B’,” he said.
Hundreds dead, lakhs displaced as monsoon rains heap misery on India, Pakistan, Myanmar
AFP | Aug 3, 2015, 05.24 PM IST
YANGON: Monsoon rains have claimed the lives of hundreds of people across Asia, authorities said on Monday, as rescue workers scrambled to reach remote areas of India, Pakistan and Myanmar in the wake of flash floods and landslides.
READ ALSO: West Bengal flood situation grim, Mamata monitors situation
Rescue operations in landslide-hit Manipur village
In neighbouring Myanmar the belt of heavy seasonal rains – augmented by Cyclone Komen – have killed 46 people so far and affected more than 200,000 with much of the country languishing under rooftop-high floods.
Villagers wading throughaflooded road at Chourigacha in Murshidabad district of West Bengal. (PTI Photo)
Myanmar President Thein Sein has promised the government will do its “utmost” to provide relief, but said parts of Chin had been cut off from surrounding areas, the report added.
Monsoon misery The annual monsoon isalifeline for farmers across the region but the rains and frequent powerful cyclones that usher them in can also prove deadly.
kai says: California wildfires torch 134,000 acres — and counting
Updated 10:17 PM ET, Mon August 3, 2015
(CNN)Firefighters worked Monday in steep terrain and other rugged conditions to fight California’s Rocky Fire, one of nearly two dozen wildfires that have torched more than 134,000 acres of the parched state this year, according to state fire officials.
California wildfires 23 photos
kai says: မိုးမရွာ.. ခြောက်သွေ့.. ရေမရှိရတဲ့အထဲ.. မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား မီးလောင်ချက်က.. ဧက၁သိန်း၃သောင်းကျော်…။
မြန်မာပြည်ကရေတွေ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားရွေ့ပေးလိုက်ဖို့.. မိုးနတ်မင်းကြီး.. Allah, Buddha, Jesus, Krishna တို့ကို တောင်းဆိုချင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ပါဝါပလန့်ဒွေ ၀ုန်းတုန်းက ၀ုန်းပီး ဘာအခုမှ ကျောင်းဆရာဂျီး လဲ….
ဗုဒ္ဓက အဲလို တွေမလုပ်နိုင်တာတော့သေချာတယ်
ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ဖြစ်တာ ကိုယ်ခံရုံပါဘဲ
@QUIL@ says: ဒီလထဲ ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးနဲ့ မှတ်မှတ်သားသား သိတာကတော့
၁) အမှိုက်သိမ်း လှည်းငယ်လေးတွေ အင်မတန်များလာသဗျ… အရေအတွက်များလာသလား …
ရှိရင်းစွဲတွေကပဲ ခေါက်ရေတိုးပြီး တဂျောင်းဂျောင်း ပြေးနေကြသလား မဆိုနိုင်ဘူး။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်စေ အဲ့ဒါ က ၂ခုကိုပြတယ်
ပထမတခုက သည်ဒေသမှာ ရုပ်ချည်း လူဦးရေတိုးမလာသလို လူတွေလည်း စီးပွားတက်လာလို့
သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင် ဖြစ်မလာဘဲ…အမှိုက်တိုးမလာဘဲ အမှိုက်လှည်းပဲ တိုးလာတာ .. (စည်ပင် အမှိုက်ကား မလာတာက ထုံးစံမို့ သူ့အင့်ပက်က မရှိ)
ဒုတိယတခုက အဲ့သည့်အလုပ် သံစကာကွပ်ထားတဲ့ ဘီးလေးလုံးကို လက်ကိုင်တပ်ရင်
ကျန်တာ ဘာအရင်းမှ မစိုက်ရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်သူများလာတာ အခြေခံလူတန်းစား ပိုမွဲလာတာ ကိုပြတယ်.
တကယ်ငတ်လာရင် အဲ့သည့်အဆင့် လူတွေက အလစ်သုတ်တာမျိုးလောက်တော့ လက်ရွံ့နေမှာ မဟုတ်လို့ (သူတို့ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပါ)
အိမ်တွေ သတိရှိဖို့ လိုတယ် .. အိမ်တွေကလည်း တဖက်မှာ အိမ်ရှေ့ကားပါကင် ကိစ္စ လုရတာဆိုတော့..
ခြံတံခါးဖွင့်ထား အိမ်ရှေ့ ပလပ်စတစ်ခုံချ (ကျော်လည်း လုပ်တယ်) စသည် လုပ်ကြတော့ လုံခြုံရေး ပိုကြောက်ရပါတယ်။ ၂) safety & daily goods များ
ယူအက်စ်မှာ နိုင်းအီလဲဗင်းဖြစ်တော့ ဆေ့ဖတီး ဂွတ်စ်များ ရောင်းအား ထိုးတက်လို့ သင်ရိုးထဲပါဖူးတယ်
(တိုးဟိုကု နဲ့ ကွာထှာ- စကားချပ်)
သည်မှာလည်း သည်လိုအချိန် ဒါတွေ ပြတ်ရင်/ဈေးတက်ရင်/၀ယ်လှောင်တာ/ကစားတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် မဆုံးရှုံးသင့်တာတွေ မဆုံးရှုံးဖို့ လိုပါတယ်
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကလည်း ဒတ်မီးတောင် အင်ပို့ရတာ ဆိုတော့ …အဲ့ဒါမျိုးတွေရဲ့ အင်ပို့ကိုမြှင့်ဖို့ ပြောကြရေးကြတာ မမြင်မိသေးလို့ စိုးရိမ်မိရဲ့
အဲ့ဒါရဲ့ပြောင်းပြန် ဆန်အိပ်စပို့ ကို ကန့်သတ်တာတော့ဖတ်ရတယ် (ဒါကလုပ်သင့်တယ် မြင်ပါတယ်)
သို့သော်ခြုံကြည့်ရင် တိုင်းပြည်အနေနဲ့ အိပ်စပို့ တခုလျှော့လိုက်လို့ ရပ်သွားမယ့်ဝင်ငွေနေရာမှာ အင်ပို့ပိုင်းက တချို့အမယ်တွေ ပိုသွင်းရမယ့်အချိန်မို့
ဒါတွေအတွက် ဘတ်ဖာ ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာ မဖတ်ရသေးတာလည်း တမျိုး
တကယ်က သွင်းတာထုတ်တာအပိုင်းထက်စာရင် ပိုအရေးကြီးတာ ဈေးကွက်တွင်း မသမာ မလုပ်အောင် ထိန်းဖို့ အဖွဲ့တွေ စောင့်ကြည့် တွေ လိုအပ်နေတာပါပဲ
အဲ့သည့်အဖွဲ့တွေ အစား ပိုပိုများလာတာကတော့ အလှူခံအဖွဲ့လေးတွေပါပဲ
ရေဘေးကို ဒို့ဝိုင်းကူမယ်ဆို ၀ိုင်းကြ၀န်းကြတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလှူခံအဖွဲ့ငယ်လေးတွေနဲ့
ရပ်ကွက်ထဲလှည့်ပြီး အလှူခံကြတာတော့ သိပ်မနှစ်သက်လှဘူး တခြား နတ်တဝေါ့ခ် သုံးသင့်တယ်မြင်တယ်
လူငယ်တွေ ပရဟိတ တွေးတာ ကောင်းမွန်တယ် အားပေးတယ် ဒါပေမယ့် အခု
နေ့ဘက်ဆို လူငယ်အဖွဲ့လေးတွေ ၁၅မိနစ်တခါလောက် အိမ်ရှေ့ အလှူခံအဖွဲ့ ဖြတ်နေ အော်နေကြလို့ပြောတာပါ။
(စေတနာမှန်သော်လည်း လုပ်နည်း မမှန်ဘူးလို့ တွေးမိတယ်)
၁- ရေနစ်တာ တမြို့တည်း ဒါမှမဟုတ် တိုင်းရင်းသားတမျိုးတည်းမှမဟုတ်တာ
၂- တချို့အဖွဲ့လေးတွေ စနစ်မကျဘူး (အဲ့သည်မှာ ရောယောင်တွေပါလာနိုင်တယ်- စစ်စစ်မှန်မှန်သမားတွေကို မစော်ကားပါဘူး..) ဘယ်လိုတုန်းဆိုတော့
၂-၁ ကျနော်ကျမတို့ ဘယ်အသင်းပါ ဘာကျောင်းသားဟောင်းများပါ ဘာစေတနာရှင်များအဖွဲ့ပါ ပြောကြ အလှူခံကြနဲ့ အလှူခံဒေသ ကို မသိရဘူး
၂-၂ တချို့အဖွဲ့တွေက ဒေသပြောပါတယ် ဘယ်လိုလူတွေ စုထားတယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး (ပြောဖို့အချိန်လည်းမရဘူး – သွားရအုံးမှာကိုး)
၂-၃ တချို့အဖွဲ့တွေက အချင်းချင်း စကြနောက်ကြ နဲ့ အတွဲတွေပါလိုပါ မသိရင် အပျော်လုပ်နေသယောင်
၂-၄ တချို့အဖွဲ့တွေက ဆက်ဆံရေးမပြေပြစ်ဘူး။ ဒါ လူတိုင်း လုပ်ရမယ့် အလုပ် လူပီသချင် ထည့်ဇမ်း ဆိုတာမျိုး မျက်နှာမာတာမျိုးပေါ့
၂-၅ တချို့တွေကျတော့ အပေါ်က ရေးထားတာတွေ တခုမှ မသိဘူး… နားလည်းလည်ပုံမပေါက် တခုခုသော နာမည်ရှိတဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့ကို စုဆောင်းပြီးသမျှ သွားပေးလိုက် ပူးပေါင်းပေးရင် ပြီးပြီ မှတ်ကြတယ်
၃- သည်တော့ အလှူရှင်တွေမှာ အောင့်သက်သက်ရယ်
၃-၁ တနေ့ဆယ်ဖွဲ့လောက် ရောက်နေမှတော့ တဖွဲ့ ၁၀၀၀ လှူရင် တနေ့ ၁၀၀၀၀ ဗျာ။ ဆယ်ရက်ဆို ၁သိန်းဆိုပါတော့။
၃-၂ တဖွဲ့ကို ၁၀၀၀ ပဲထည့်ရင် အဲ့အဖွဲ့ ကတာဝန်ခံက မကြည်ချင်သလိုလို တွေ့ရတတ်သဗျ။ သည်လောက် သည်လောက် နေရာ နေနေပြီး စေတနာရယ်မွဲထှာ ဆိုတာမျိုး။
၃-၃ သူတို့နားမလည်တာက လူတိုင်းမှာ ဇာတိ နဲ့ လူမျိုး အစွဲတော့ အနည်းနဲ့အများ ရှိတတ်ကြတယ်။ သည်တော့ အတော်များများက အဖွဲ့တိုင်း မလှူဘူး။
၃-၄ ၃-၃မှာပါတဲ့အချက်ကို ဗီလိန်လုပ်ပြီး ပြောပြရရင် ကျုပ်ကျောင်းက ကျောင်းသားဟောင်းအဖွဲ့ဆို လှူမယ်ဗျာ ကျုပ်ကျောင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကျောင်းသားအဖွဲ့လာရင် မသိချင်ထောင်ထောင်နေမယ် (တနည်း) ယဲဇားေ
ဟာင်း လူမျိုးအဖွဲ့ဆို လှည့်မကြည့်ဘူး။ လက်ရှိယဲဇား ဇာတိဆို ဖြတ်ပိုင်းမတောင်းတောင် ဆဲလ်ဖီတွဲရိုက်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပရိုမိုးရှင်းဆင်းမယ်… ဒါမျိုးတွေပေါ့…။ (ဥပမာပြောတာပါ တကယ်မလုပ်ပါဘူး)
၃-၅ နောက်ပြီး အိမ်တွေမှာ ဆိုရှယ်ပရက်ရှာ ၀င်ပါတယ်။ လင်ကမယားကို နင့်ဇာတိကျ လှူပြီး ငါ့ဇာတိက ချာတိတ်တွေ လာတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်တယ် ဟလားတို့။ မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတဲ့ လူမျိုး ၂စုရဲ့ အိမ်တွေ အချင်းချင်း လှမ်းချက်ပြီးတော့ သင်းကသည်လိုလား ငါက သည်လိုကွ ဆိုတာမျိုးတို့..။ အစုံပါပဲ။
၃-၆ အဲ့ဒါတွေထက် အချုပ်ပြောရရင် အစကတည်းက အစွဲတခုနဲ့ ထွက်လာခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အများကြီးကြောင့် အစကတည်းက အစွဲတခုနဲ့ နေနေတဲ့ (ဒီနေရာမှာ ဟိုသီချင်းခေါင်းစဉ်သုံးမယ် သီးသန့်ဖြစ်တည်မှု) တအိမ်နဲ့
တအိမ် တနေရာနဲ့တနေရာ မတူညီတာကို ထိပ်တိုက်တွေ့တော့ အဆင်မပြေမှုဖြစ်လာတာပါ။
၃-၇ အဆင်မပြေတာဆိုတာက ဒါနဆန် Vs ဆွမ်းတော် နဲ့ ဥပမာပေးရမယ်။ ဒါနဆန်က တဖွဲ့ ၁၄-၅ယောက် နဲ့ ၂-၃ဖွဲ့လာတယ်လေ။ ဆိုတော့ တပါးတဇွန်းပဲ အိမ်တွေလောင်းလေ့ရှိတယ်။ အိမ်ထဲကြွ ထိုင်ပြီး ဆွမ်း
ခွက်ကမ်းတဲ့ ဆွမ်းတော်ကျတော့ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်အထှာနဲ့ ပြောထားဆိုထား (ဆိုက်ကော်လော်ဂျစ်ကယ် ကွန်ထရက်ချုပ်ထားပြီးသား ဘုန်းကြီး ကျတော့) တအိမ် တနေ့ ၃ပါး ၅ပါး ပေါ့ဗျာ ။ သို့သော် ဘုန်းကြီးတွေ ကို ဆွမ်းတနပ်စာ ရယ်မဟုတ်ပေမယ့် ဆန်တဇွန်းထက်တော့ ပိုတယ်မဟုတ်လား။ အဲ့ဒါမျိုး … ကျုပ်လည်း မပြောပြတတ်တော့ဘူး။
၃-၈ ဗော်လန်တီယာတွေကို အပြစ်မတင်ပါဘူး ဗော်လန်တီယာတွေ (အုံးလိ) အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းက လှူချင်တဲ့ဒေသ(လူမျိုး) နဲ့ ပတ်သတ် နှံ့စပ်တဲ့ အသင်းတိုက်တို့ အစုအဖွဲ့တို့ကိုသွားပါ။
၃-၉ ပြီးရင် ဘယ်ကို သွားအလှူခံသင့်တယ် ဘယ်တွေမှာ တော့ ကိုယ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစုအဖွဲ့ရဲ့ တူတာမရှိလို့ သွားလည်း အပိုပဲ (ဒါမှမဟုတ် ပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါမယ်)
၃-၁၀ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ပိုတိကျကောင်းမွန်တဲ့ တားကတ် ထိမှာပေါ့…။ စနိုက်ပါပစ်ပါ မရှင်းဂန်းမဆွဲပါနဲ့။ (အထူးသဖြင့် သည်လိုမားကတ်မှာ)
၄) အချက်အလက် နဲ့ အရင်းအမြစ်
အချက်အလက်က အဆင့်တခုအထိ ကျုပ်တို့ကို စမတ်ဖြစ်အောင် လုပ်လိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကို အရင်းအမြစ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့.
၄-၁ ဘယ်က အခံရဆုံးလဲ။ ဘယ်က ကူဖို့အခက်ဆုံးလဲ။ ဘယ်က ထိခိုက်တဲ့ပမာဏ အများဆုံးလဲ ဆိုတာသိဖို့ပါ။
၄-၂ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အစွဲတွေကြောင့် ဒါတွေ လိုတယ် ပြောတာပါ။ လှူပါတယ်ဆိုမှတော့ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်ချင်မှာ အလှူရှင်တိုင်းရဲ့ ဆန္ဒပါ
၄-၃ အလိုအပ်ဆုံးနေရာကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အတိကျဆုံးပမာဏ ကူနိုင်ဖို့က အဓိက…။ ဘယ်လူမျိုး ပိုလိုတယ် ဘယ်ဒေသ ပိုကယ်ရမယ်ဆိုတာ မပါဘူးနော်…။
၄-၄ အိုအကူအညီပဲ များလေ ကောင်းလေပဲဟေ့ ဆိုတာ အကောင်းမြင်ဝါဒဗျ။ အေးလေ… နေရာတိုင်းမှာတော့ အဆုံးရှုံးကရှိမှာပဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ကံပေါ့ ဆိုတာက အဆိုးမြင်ဝါဒ။ ရနိုင်သမျှသော ရီဆိုစ့်ကို အတိကျဆံ
ုးဒေတာသုံးပြီး အလိုအပ်ဆုံးဒေသတွေကို ပို့ပြီး ဆုံးရှုံးမှုကို အလျှော့ချနိုင်ဆုံးက အဖြစ်သင့်ဆုံးဝါဒ။ အာ့ကြောင့်ပါဗျာ…။
၄-၅ သွားလှူတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တွေ ဒေတာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရင် အတိုင်းအတာတခုထိ ဒါမျိုး အကောင်အထည်ပေါ်လာမှာပါ။
၄-၆ ဘယ်သူကောက် ဘယ်သူသွား ဘယ်သူ မှတ်တမ်းယူ ပြီးရင် ဘယ်မှာသွားပြီး ဒေတာပို့ ဆိုတာမျိုး ဟိုဘက်-သည်ဘက် ရှိမနေဘူး။ catch ball ဆိုပါတော့။
၄-၇ အဲ့ဒါမှ အသစ်လာလတ္တံ့သော လိပ်စာမတတ်ထားတဲ့ လိုရာသုံးပါဆိုတဲ့ အကူအညီတွေ ကိုယ့် အစွဲရှိရာရောက်/ရောက်ချင်ရာရောက်/ဒါမှမဟုတ်လည်း မှောင်ခိုဆီရောက် ဆိုတဲ့ ဘေးက ကင်းဝေးမှာပါ။
၄-၈ ဒါမျိုး ဖြစ်ဖူးပါတယ်…. အဲ့သည်တုန်းကထက် မျက်မှောက်က ပို စမတ်ဖြစ်လာတော့ အပေါ်ကအချက်တွေကြည့်ပြီး အစွဲတွေဖြုတ်ပြီး အချက်အလက်တွေ ပူးပေါင်းနိုင်ရင် ပိုထိရောက်မှာပါ။
၄-၉ ပြီး…. ပေါင်းစည်းအချက်အလက်ကို အားလုံးကိုထုတ်ပြဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဘယ် အာနာရှင်နယ်မို့/လူမျိုးမို့ တို့ ဘယ်နာမည်ကျော် နိုင်ဂံရေးသမားမို့တို့ ဘယ်ဇဗျစ်သီးကြောင့်မို့တို့ဆိုတဲ့ အဂတိတရားကင်းမှာပါ
၄-၁၀ အဆိုးယက သုံးမရပါဘူးကွာ … ငဒို့ဟာငဒို့ တနိုင် ဗျင်းကြတာပေါ့ ဆိုပြီး တွေးကြတာများပါတယ်။ သူတို့ကလည်း ဒါကို ဂေါ်ရီလာ မားကတ္တင်း ထင်နေတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပူးပေါင်းရမှာ … ပူးပေါ
င်းဆောင်ရွက်မှ … ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ ဒေသစွဲတွေ ပါတီစွဲတွေ အကုန်ချခဲ့ပြီး လက်တွဲပြီး ဗျင်းမှ အကောင်းဆုံးပါဖောမန့်စ် ပေါ်မယ် ။ သည်သဘောပါဗျာ။
ကျုပ်တို့ နှစ်တိုင်းလှူမှာလား…။ ခညားတို့ရော နှစ်တိုင်းလှူချင်မလား
ပိုဆိုးတယ် ဒုက္ခသယ်တိုင်းရော နှစ်တိုင်း ဘေးတွေ့ချင် ထမင်းထုတ်စောင့်ချင်ကြမလား။
မိုးလေ၀သအချက်အလက်တွေက နောင်ပိုဆိုးလာမယ် တွက်ချက်ကြတယ်။ (ပိုမဆိုးလာအုံးတော့ သည်ပစ်ခ်ျ အတိုင်း အမြဲဖြစ်နေတောင် အမျိုးပြုတ်တော့မယ်)
ဆိုတော့ဗျာ… နောင်နှစ်တွေ သည်လောက် မဆိုးအောင် လုပ်ရမယ်။
၅-၁ အခုဘာဆိုးနေလဲ ပြင်ရမယ်…. အဲ့ဒါ rightawrong
၅-၂ အခု မဆိုးနေတဲ့ နေရာတွေလည်း ဘာကြောင့် ခံသာနေလဲ ရှာရမယ် prevent something good
၅-၃ မှားတာတွေပြင်ပြီး ကောင်းတာတွေ ထိန်းပြီးမှတော့ ပိုကောင်းတဲ့ ဒေသနေရာဖြစ်အောင် ဖော်ဆောင်ရမယ် (better world)
အဲ့အတွက် ဒေတာလိုသလို ပက်ဆံလည်း လိုတယ်။
ဒေတာလည်းမရှိ ပက်ဆံလည်းမရှိမှတော့ နွေဆို လွန်ဆွဲလိုက် မိုးဆိုလှေစီးလိုက် က တက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျုပ်တို့ ပျက်မှပြင်မယ် လုပ်မရဘူး။ ဘာကြောင့်ဆိုတာ လိုက်ရှာရမယ် (တဖက်ကလည်း ဘယ်မှာဘယ်လိုအမှားကြောင့်ပါဆိုတာ ရှာသူတွေ အမှန်သိရင်လက်ခံ ပြင်ဆင်ရမယ်)
သည်တော့ ပူးပေါင်းရမယ်။ ၆) amalgamate
နေရာတိုင်း အပြိုင်အဆိုင်ရယ် အတိုက်အခိုက်ရယ် ဆန့်ကျင်မှုရယ် ရှိကြတယ်
ဒါကန်မီကယ် စကားတခွန်းပါ..။ အနည်းဆုံးတော့ အေ နဲ့ ဘီ ပေါင်း မရဘူး ဆိုတာမျိုးကို ကတ်တလစ် တခုခုနဲ့
မဟားဒရား ပေါင်းထားရင် အေသပ်သပ် ဘီသပ်သပ် စပ်ထားတာ မြင်ရအုံးမယ်…
အမယ်လ်ဂမ်မှာ အဲ့လိုမရှိဘူးဗျ….။ အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာ…
ကျုပ်တို့လူမျိုး … လွတ်လပ်ရေးကိုလည်း ဒီနည်းနဲ့ ရယူခဲ့တာမဟုတ်လား။
မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မှာ.. အလှူခံအဖွဲ့များဖြစ်သလိုပဲ.. ယူအက်စ်က မြန်မာတွေမှာလည်း.. ပုံစံတမျိုးနဲ့ဖြစ်နေသဗျ..။
လူပေါင်းစုံက.. ငွေပေါင်းစုံကို.. ပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ကောက်ကြသပေါ့လေ..။
မြစပဲရိုး says: အလှူခံ ကိစ္စတော့ ဒီလောက် အသေးစိတ် အခုမှ သိတော့ တယ်။
အံ့ဖွယ်ဘဲ။ ထည့်ပြီးပြီ လို့ ပြောပေါ့။ အားနာစရာမှ မဟုတ်တာ။
တကယ်တော့ ဘယ် အလှူမဆို အိမ်တံခါးခေါက် အလှုခံတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။
လမ်းပေါ်မှာ ရပ်ပြီး ခံပေါ့။
လှူချင်စိတ် ရှိရင် လာလှုလိမ့်မယ်။
အဲဒါမျိုး ကိုလဲ ဥပဒေလုပ် ဖို့ ကောင်းတယ်။
မဟုတ်လဲ အိမ်တံခါးခေါက် အလှူ ဆို မထည့် နဲ့။
FB ဖြတ်ပါတယ် ဆိုမှ ဒီ ကိစ္စဖြစ်တော့ မနေနိုင်တော့ ပြန်သုံး။
တစ်ချို့ မြင်ရတာ တွေ က တော့ ပြောရင် သင့်/မသင့် နေရင်း ပါးစပ်ပိတ်နေမိ တာ။
ဒါပေမဲ့ မနေနိုင် လွန်းလို့ Status တစ်ခု တင်လိုက်မိတယ်။
အကြောင်း တစ်ခု နဲ့ လဲ ဆက်လို့ ပါ။
ဒီနေ့ ဒီမှာ ဆန္ဒပြုသူစာရင်း တဲ့ ထွက်လာပြီ။ ။
လူပေါင်း ၅၁၂ ယောက် ဘဲ မဲ ပေးဖို့ ဆန္ဒပြုတယ်။
Final ကျ ပြုတ်မလားမသိ။ အဲဒီမှာ အိမ်လုံးကျွတ်မှ စာရင်းမပါတာ။ ထားတော့။ ကိုယ့်ဘက်က တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားတော့ ကြည့်ရမှာဘဲ။
ဒီ UK မှာ မြန်မာပြည် က လူပေါင်းများစွာ နေနေတာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း လေး တစ်ခု ရဲ့ အလှူပွဲ ဆို မရှိဘူး ဆိုတောင်မှ ရာချီ နေတာကို။
အခုတော့ မဲ ပေးဖို့ ကို တစ်နိုင်ငံပေါင်း ရင် လူ ငါးရာ မက ရသင့်ပါတယ်။
ဒါမျိုး အလှူ တွေ မှာ အားပါးတရ လှူတာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မောင်ဂီ ရဲ့ အချက် ၅ မှာ ပြောသလို တစ်သက်လုံး ဒီလို လှူ နေနိုင်တယ်ဘဲ ထားပါဦး။
အဲဒီ ဒုက္ခသည် လူ တွေ က သူများ ပေးစာကမ်းစာ စားပြီး သူများ လှူ မှ စားရ မှာ မျိုး ဖြစ်နေတော့ မှာပေါ့။
သူများ က သနား မှ အသက်ရှင်ရ၊ ပညာသင်ရ တော့ မှာလား။
တကယ်တော့ တိုင်းပြည် တစ်ပြည် ရဲ့ အစိုးရ ဟာ မိဘ ဘဲ။
ပြည်သူက မိဘ မဟုတ်ဘူး။
ပြည်သူ ကို ကိုယ့်သားသမီး ကို ပျိုးထောင် သလို လိုတာ ကြည့်ပြီး စီစဉ်ပေး အားဖြည့်ပေးရမှာ။
ဒီလို ပြသနာဖြစ်လဲ အစိုးရ က သာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း တွေ နဲ့ ဦးစီး ဦးဆောင်လုပ်ပေးရမှာ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည် မှာ ဒီ လို ဘေးဒုက္ခရောက်တာ ကို တာဝန် ယူရ မဲ့ လူက အစိုးရဘဲ။
ကျန်သူ တွေ က အစိုးရ ကို ဝိုင်းကူပြီး ပံ့ပိုး ရမှာ။
ပြည်သူ တွေ မှာ ဒီ လို ခံစားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိရမယ်။
အဲဒီလို ပြည်သူကို သားသမီး လို အရိပ်ကြည့်ပြီး လိုတာ လုပ်ပေးမဲ့ အစိုးရ ကို ရအောင် လူတိုင်း မှာ တာဝန်ရှိ တယ်။
ဥပဒေမဲ့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံ ရဲ့ စနစ် ဆိုး ကြီး ကို ပြောင်းနိုင်ဖို့ လူတိုင်း မှာ တာဝန်ရှိ တယ်။
အခုတော့ ရေတို ကိစ္စ အလှူထည့်ရုံ နဲ့ တာဝန်ကျေပြီ မှတ်နေကြ တဲ့ သူ တွေ များ နေရင်တော့ ဒီလို လူ တွေ ကို ပိုပြီး နစ် အောင် လုပ် နေတာ နဲ့ အတူတူဘဲ။
မနေ့က ဂျေကေ ရဲ့ စာတစ်ပိုဒ် ကို မျှချင်သေးတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ ဩဇာသက်ရောက်မှုကို သုံးပြီး အသံထွက်ခွင့် မရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ဟစ်အော် ကြွေးကျော် ပေးမယ် ဆိုရင်၊
အင်အားရှိတဲ့ သူတွေဘက်က မရပ်ဘဲ အင်အားနဲတဲ့ သူတွေဘက်က ရပ်မယ်ဆိုရင်၊
ကိုယ်လို အခွင့်အရေး မရတဲ့ သူတွေရဲ့ ဘဝကို ဝင်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာကြည့်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူး စွမ်းပကားကို ကိုင်စွဲထားမယ် ဆိုရင်၊
ရုပ်လောကကို ပြောင်းလဲပေးခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများကလဲ အောင်ပွဲကြီး ခံပေးပါလိမ့်မယ်။
. မြန်မာလူမျိုး ပါဝါရှိသူ အများ ကတော့
“ကိုယ် အေးအေး နေရ တော်ပြီ။ ပိုက်ဆံ လှူမှာပေါ့ ။ ကိုယ့် ကံ နဲ့ ကိုယ်ဘဲ ”
လို့ ပြောနေ ၊ တွေးနေသူ တွေ များနေမှာ သိနေပြီးပါ။ :-((((
@QUIL@ says: အရေးထဲ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ အရင်လာပြောနေတယ်….
အဲ့ဒါခနထားပါအူးဗျာ…. အခု အရေးပါတာက
ရေက … ဘယ်ပါတီကွ ဆို ဗျင်းတာမဟုတ် ဘယ်ကဆိုပြီး သမတာမဟုတ်…
ခု ကယ်တဲ့ ကူတဲ့ ကိစ္စမှာ ဖြစ်တဲ့ဒေသထဲ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အယောက် ၁၀၀၀ သေရင်
တနိုင်ငံလုံးအတွက် အများဆုံး မဲတထောင် ဆုံးရှုံးပါလား ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်
(မဲကတော့ တထောင်မပြည့်ပါဘူးလေ ကပ်ညင်းချင်ညင်း အနည်းဆုံး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်လုပ်ကျွေးမယ့် အရွယ်ကောင်း တထောင် သွားမယ် ဆိုပါစို့)
ဗမာပြည်အလံ အတိုင်းပဲ…. အနီ နဲ့ အစိမ်း ၂ခုရှိတယ် ဆိုပါတော့…. အများစု တဖက်ဖက်ကပ်ကြတယ်
ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ ဝေးစွ … တဖက်နဲ့ တဖက် အပြစ်တင်ဆဲဆိုနေတာသာ ခပ်များများမြင်မိရဲ့….
ပုံတွေရော စာတို စာရှည်တွေရော … မျိုးစုံ…
တကယ် ရေနစ်နေတဲ့သူတွေ အားနာဖို့ကောင်းတယ် မြင်မိ…
အစိုးရ မကောင်းတာ တပိုင်း… ခုချိန် ဟဲ့အစိုးရ … ငဒို့ ဒါမျိုး ၀ိုင်းကြ၀န်းကြမယ် သက်သေပြရမှာ ဖြစ်ရမှာတပိုင်း…
ထိပ်ဆုံး မဲကိစ္စလိုမျိုး ပြောကြေးဆို… အနီကလည်း လုပ်ပြရမယ့်အချိန်
အစိမ်းကလည်း သူ့အတိုင်းအတာထိန်းရမယ့် ကာလ
အ၀ါကတော့ ထားလိုက်တော့ … အဲ့အပိုင်းကသပ်သပ်….
အဖြူ ခေါ်ရမယ့် တသီးပုဂ္ဂလ သမားတွေကလည်း သီးခြား ရယ်…. တူရာချင်းတောင် ပေါင်းဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့ကာလ…
တယောက်ချင်းလှုပ်ရှားမယ့်အစား အပြန်အလှန် နားလည်မှုယူပြီး ပူးပေါင်းရမယ့် ကာလလို့ပဲမြင်တယ်
အချက်အလက်ပိုင်း မပူးပေါင်းနိုင်ရင်တောင်…. အရင်ဝင်ခဲ့တဲ့လူက နောက်မှ လာဝင်ကူမယ့်လူကို ဘယ်နေရာဘယ်လိုဖြစ်တယ် ရှိတယ် ဆိုတာ
ပြောပြလမ်းညွှန်ပြီး ကူညီပေးတာမျိုး အတော်နည်းသေးတယ်။ အဲ့သည့်ထက်စာရင် မာန်စောင် ဆဲဆိုကြိမ်းဝါးနေတာပဲ အများစုတွေ့တယ်။
တချို့ အလှူရှင်တွေ ဗော်လန်တီယာတွေကအစ…ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ဘယ်လိုပါ ရေးတင်တာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်း သို့သော်
ကိုယ်နဲ့ သဘောမညီတဲ့ တဖက်ဂ၇ုကိုဆဲလို့ ဖြဲလို့ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် ပိုကောင်းသွားမလား တွေးဖို့လိုတယ် မြင်ရဲ့…။
အချင်းချင်း ညှိကြ နှိုင်းကြ ပြောကြ သတင်းထုတ်ပြန်ကြဖို့ ထိပ်ဆုံးလိုတယ်
ဘယ်သူ ဘယ်လောက်တာဝန်ရှိတယ် ငြင်းနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်။
စွမ်းသမျှ ၀ိုင်းဝန်းရမယ့်အချိန် … သီးခြားချင်းကတော့ …တကယ့်ကို သီးခြားချင်းပါပဲ..
တိုက်ခန်းတခန်းထဲ မီးလောင်လို့ လုထွက်ကြတယ် ဆိုရင်တောင် အချင်းချင်းတိုက်မိနေလို့
အများစု အသက်ပေးရဖို့များတာ…. ဘယ်လိုစီကြ ဘယ်လိုထွက်ကြဆိုတာ တကယ်လိုအပ်ရဲ့…။
မြစပဲရိုး says: မစ္စတာ ပရဲစီးဒန့် ရဲ့ မိန့်ခွန်း ကို မနေ့က တွေ့တယ်။
သူ့မြေးမြစ် တွေ လက်ထက်ကျရင် ရေခဲမြစ် တွေ၊ သစ်တောတွေ၊ တောင် တွေ မတွေ့ရတော့မှာ စိုးသတဲ့။
အီမိုးရှင်း နဲ့ ကို ပြောသွားတာ။
အမှန်တော့ အိုဘားမား ကို ကြိုက်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စ ကတော့ လူကို ကြိုက်လို့ ဘဲ မျက်စိမှိတ် ထောက်ခံ ရမှာဘဲ။
မှန်မမှန် ကတော့ နောက် ကိုယ်မရှိနိုင်တော့ တဲ့ နှစ်များ ကျ မှ သိနိုင်မယ် ဆိုတော့ ဝိတ်အန်စီး လို့ မပြောနိုင်။
” climate change” ဆိုတာ ကိုဘဲ သိပ္ပံပညာရရှင်များ နှစ်စု ကွဲ ပြီး ပြောနေတော့ ကိုယ့်လို နကန်းတစ်လုံးမှ နားမလည်သူအဖို့ တော့ ဟိုလူ ပြောလဲ ဟုတ်သယောင်၊ ဒီလူ ပြောလဲ ဟုတ်သယောင်ပေါ့။
ဒီတော့ ကြားလူ အနေနဲ့ Box ထဲ က ထွက်ကြည့်ရင် ဒီလို ပြောတဲ့ သူတွေ မှာ သူဟာနဲ့ သူ bias တွေ ရှိ နေတာ မို့ နှစ်ဖက်လုံး မှားနိုင် နေတော့ ခက်ရော။
အခုလဲ ” climate change” တွေဟာ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် emission တွေကြောင့် လို့ ပြောသူ ရှိသလို အဲဒါဟာ myth လို့ ပြောသူ တွေလဲ မရှားဘဲကိုး။
မစ္စတာ ပရဲစီးဒန့် ကို ဘယ်သူ တွေက ဘယ်လို လော်ဘီ လုပ်ထားလဲ မသိ။
ဒီတော့ တစ်ဖက် က ရီပါပလစ်ကန်များ ရဲ့ ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဆွေ့ဆွေ့ခုန် ကြရော မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ ပြန်တွေးတော့ ဟုတ်သား။
အဲဒီ power plant တွေ မရှိတော့ ရင် ကျောက်မီးသွေးတွင်း တွေ ပိတ်ရမှာ ဆိုတော့ အဲဒီ က အလုပ်သမား တွေ ကို ဘယ်သူက ဘယ်လို တာဝန်ယူမယ်တဲ့လဲ။
အဲဒီ power plant က နေ ရတဲ့ လျှပ်စစ် တွေကို ဘယ်က အစားထိုးမယ်တဲ့လဲ။
nuclear energy ??? ဒါကိုလဲ ဂျပန်မှာ ဖြစ်ပြီး ကထဲ က လက်မခံချင်တော့။
solar energy ??? နေစွမ်းအား ကို မှီနေရတော့ နေ ရောင် မရ တဲ့ လများ ဆို ဘယ်လို လုပ်ပါ့။
. ပြောတော့ လွယ်သား။ ဆုပ်လဲဆူး ၊ စားလဲ ရူး အခြေမျိုး။
လူပြိန်းလို တွေး နေမိတာ။
လူ တွေ အကြောင်း ကိုပါ။
လူ တွေရဲ့ “Save the environment” ဆိုတာကို လက်ခံ တယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ်ဘဲ လူညီညီ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်မလား ဆိုရင် ရူး ချင်ယောင် ဆောင်ကြလိမ့်မယ်။
ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီး ဆဲလ်ဖီ တာ က ဘယ်သူမဆို အလွယ်လုပ်နိုင်တာဘဲ။
တီရှပ် ဝတ်ပြီး လူထဲ သွား တာ ကလဲ ဘယ်သူမဆို အလွယ်လုပ်နိုင်တာဘဲ။
တကမ္ဘာလုံးက လူ တွေ လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး မီး တွေ မသုံး ဘဲ နေ ကြပါလား။
အဲဒါဆို ကိုယ့်မှာ ဓာတ်အားခ လဲ သက်သာမယ်။ အင်နာဂျီ တွေလဲ အလဟသ မဖြစ်ဘူး။
အခုဆို ညဘက် သုံးလိုက် တဲ့ မီး တွေ၊ နေ့ ဆိုလဲ တစ်ချို့ ကား တွေ အလင်းကြီး မှာ မီး တွေဖွင့် လို့။
အခု ဆို gadget တွေများလာ လေ ပိုပြီး လျှပ်စစ်အား လိုလေ။
ကွန်ပျူတာ၊ တယ်လီဖုန်း၊တီဗီ၊ အစားအသောက်ချက်တာ အားလုံး လစ်မစ် နဲ့ သုံး။
ကားမစီးဘဲ တစ်ချို့ နေရာ တွေ မှာ လမ်းလျှောက်။
အဲဒါမျိုး တွေ ကို ကမ္ဘာ နဲ့ ချီပြီး ကန်ပိန်း လဲလုပ်၊ တစ်ဦးချင်းလဲ ရေရှည် ကိုယ့်အသိ နဲ့ ကို လုပ် အတော် အင်နာဂျီ သက်သာမှာ။
ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံ တွေ မှာတော့ ပညာတတ် လေ ဒါ တွေ ကို ပူးပေါင်းလေဖြစ်တော့နေတာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ တကဲ့ လက်တွေ့လား၊ ရှိုးပြလား မသိ။
အစိုးရကလဲ လုပ်ငန်း တွေ အကျိုး နဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်အကျိုး မျှ အောင် လုပ်၊
တစ်ဦးချင်းကလဲ ချွေတာမျိုး လုပ်ရင် စွမ်းအင် သုံးတာတွေ အတော်လေး တော့ သက်သာမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ လူ တွေ က သိ တဲ့ အတိုင်းဘဲ။
ခဏပေါ်ပင် လိုမျိုး တွေ ဆို အပျော်မို့ အားကျိုးမာန်တက် လုပ်ကြမယ်။
တကဲ့ ခံယူချက်ကောင်းကောင်း က ရင်ထဲ မှာ မကိန်းတော့ ရေရှည် သဘော လုပ်ရမယ်၊ ကိုယ့် အတ္တ လိုဘ ကို ထိပါးလာ မယ် ဆိုရင် ရှောင်သွားကြမှာ ပါ။
. ဖြစ်လာလဲ ညည်းမနေနဲ့။ ဒီလို ဘဲ ခံ ကြပေတော့။
ဒီလို ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်တာ သူများတွေမှာ ချည်းမဟုတ်။ ကိုယ့်ကိုလဲ တစ်ချိန် ကူး လာနိုင်တယ် ဆိုတာလေးလဲ သိဖို့ သင့်သေးတယ်။
kai says: Hla Swe
ကျနော်တို့ဂန့်ဂေါမှာတော့ ရေကျသွာပါပြီ ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ပျက်ဆီးခဲ့တာတွေလိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ် အဓိကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတဲ့ ပုံညှာအနောက်ဖက်ခြမ်း မြေပြိုကျတာကိုမိုင်းနဲ့ခွဲ စက်ယန္တယားနဲ့ရှင်းနေတဲ့ ပဆင အဖွဲ့ကိုသွားအားပေးတယ် မန္တလေး ဂန့်ဂေါ လမ်းမပြတ်တောက်ပါဘူး ပဆင က စက်တွေကို အဲဒီ အီရိုးရှင်း ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှထားပြီး အိဆင်းလာသမျှ ဖယ်ရှားပေးနေတယ် ပဆင ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဂန့်ဂေါတစ်ဝင်ညအိပ်ပြီးကားနဲ့ လာသွားတာတွေရတယ် ဒီလိုမျက်နှာလာပြသွာတော့ ကောင်းပြီပေါ့ ။ မနှစ်ကဘတ်ဂျက်မှာပါပြီး အနောက်ဂန့်ဂေါက ကမ်းမပြိုအောင်လုပ်ထားတဲ့ မြေထိမ်းနံရံကြီး နဲနဲ အိ သွားတယ် အသေးအမွှားပါ ဘိလပ်မြေမှုတ်သွင်းလိုက်ရင်အစဉ်ပြေမှာပါ အနောက်ဂန့်ဂေါက ဘကြီးတစ်ယောက်ကပြောတယ် ဒါကြီးလုပ်ထားလို့ရေဘယ်လောက်ကြီးကြီး ခေါင်းပြားအောင်အိပ်နိုင်ပါ့ဗျာ လို့ပြောတယ် သူကရေထိုးသက်သာအောင် ရေလမ်းကြောင်းလွှဲနိုင်မယ့်နေရာကို ညွှန်ပြတယ် နွေအခါရေနဲချိန်မှ ဒိုဇာ တစ်ကြောင်းဆွဲလောက်ဆော်ပေးလိုက်ရင် အိုကေမှာပါ ။
တည်ဆောက်ဆဲ မြစ်သာတမံကြောင့်ထိခိုက်မှု့လို့ပြောနိုင်တာက ကော်ဖါဒမ် ရှေ့ကလုပ်ထားတဲ့ ယာယီရေပိုလွှဲကဒလဟောထွက်လာတဲ့ရေထိုးလို့ ပြင်သာရွာက စာသင်ကျောင်းနှစ်ဆောင် ကျောင်းဆရာနေအိမ် ၂ လုံး ကမ်းနားက အိမ် ၁၀ လုံးလောက်ထိခိုက်သွားတယ် အဲဒါအားလုံးကို တမံစီမံကိန်းက အားလုံးတာဝန်ယူပြီးအသစ်ပြန်ဆောက်ပေးမယ်လို့ဂတိပြုတယ် ကမ်းပြိုရင်ပါသွားမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကြိုတင်ဖျက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလည်းပြန်ဆောက်လုပ်လှူ ဒါန်းပါမယ်လို့ ကျနော့်ကိုပြောတယ် ။ အဲဒီမှာ ပရောဂနဲနဲဝင်တယ် သိတယ်မဟုတ်လား ဘာပရောဂလည်းဆိုတာ မလိုခြင်ဘူး ရွာရှိ အိမ်အားလုံးကို တအိမ်ထောင် သိန်း ၂၅၀ လျှော် ရမယ် အိမ်တွေကိုလည်းနေရာသစ်မှာ ရွှေ့ပြီး အသစ်ဆောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ဘာမှ မဖြစ်တဲ့အိမ်တွေကိုလည်းလျှော်ကြေးရမလားဆိုပြီး ဖျက်ကြတယ် ဆိုးပါ့ ။ အမှန်က ယာယီရေပိုလွှဲက လာမယ့်စက်တင်ဘာလဆိုပိတ်လိုက်တော့မှာဖြစ်ပြီး တမံရဲ့အဓိကရေပိုလွှဲက ဘဲနူတ်သီးပုံစံ ရေပိုလွှဲကပုံမှန်မြစ်သာမြစ်ရေလမ်းကြောင်းထဲကိုထွက်လာမှာ ဒါကို ပရောဂ ဝင်ပူးသွားတော့ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်တယ်တွေဘာတွေပြောလာရော အမှန်ကသူတို့ရွှေ့ခြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာသစ်ကမှတကယ့်ရေပိုလွှဲဖြစ်လာမယ့်နေရာထိတ်တည့်တည့်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဂူဂဲလ် နဲ့ရှာကြည့်တော့ ထင်းထင်းကြီးတွေ့ရတယ် ခုလက်ရှိနေရာရေစားသွားတယ်ဆိုတာက ယာယီရေပိုလွှဲက ရေတွေပေါ့ စက်တင်ဘာမှာဒါကြီးပိတ်လိုက်ရင် ဘာရေမှလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဒါဆိုမိုးမရွာအောင်အာမခံလားတဲ့ နေဦး သကြားမင်း နဲ့စာချုပ်တက်ချုပ်လိုက်ဦးမယ်လို့ ဝေးပါ့ ။
ဆည်ရဲ့ယာယီရေပိုလွှဲနောက်က ကော်ဖါဒမ် ကြောင့် မြစ်သာရေအလုံးလိုက်ဝင်ဆောင့်မယ့်ဒဏ်ကလွတ်သွားတာ က ဂန့်ဂေါ မြို့နဲ့ မြစ်သာမြစ်ကူးကြိုးတံတားဘဲ ဆိုတာအဖြေပေါ်သွားတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ၁၉၆၄ မြစ်သာမြစ်ကြီးရေကြီးလျှံ တုံးကရေအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့ခုက မြို့ထဲရေလုံးဝမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုတာပါဘဲ ။
တမံတွေလုပ်လို့ရေကြီးရေလျှံမှု့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ကျနော်လက်မခံပါဘူး တမံပြိုကျမှသာဖြစ်မှာပါ ခုတခုမှပြိုတယ်မကြားမိသလို ဘာဆည်မှမရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ချင်းပြည်နယ်တွေလည်း ရေဒဏ်ခံရတာဘဲ ။ မြန်မာ့သစ်ထုတ်လုပ်မှု့အားလုံးရဲ့ ၇၀%ကို ပိုက်ဆံယူပြီးတရုတ်ပြည်ကိုမှောင်ခိုထုတ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်တွေကအဓိတရားခံထဲမှာပါ ပါတယ် ။ ဆည်တွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ။
အင်းပေါ့လေ ဘာသာရေးကျမ်းစာတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင် မသိလို့ နဲနဲ မေးကြည့်ခြင်တယ် ခရိယာန်ဓမ္မကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ကမ္ဘာပျက်မိုးကြီးရွာတော့ အမျှော်အမြင်ကြီးစွာ အထီးအမတစုံဆီတင်ဆောင်ထားတဲ့ နောဧ ရဲ့လှေကြီးတစ်စင်းသာလျှင် ပေါလောပေါ် ကျန်ခဲ့စဉ်အချိန်တုံးက သဖန်းဆိပ်ဆည်ကြီးဆောက်ပြီးပြီလား လို့ မေးခြင်ပါတယ် ဗျာတို့ရေ ။
kai says: Wira Thu added 42 new photos — with Bhikkhu Bodhi.
“စစ်အစိုးရတည်ဆောက်ခဲ့သော မြစ်သာရေလှောင်တမံကြောင့် ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်”
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါမြို့၊ မြစ်သာရေလှောင်တမံကြောင့် ပြင်သာကျေးရွာကြီး တစ်ရွာလုံး ရေတိုက်စားလို့ ပျက်စီးသွားပါပြီ။
အဆောက်အအုံများ ပြိုကျသူကပြိုကျ၊ ဖြိုချသူကဖြိုချနှင့် ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးသွားရတာပါ။
ဒီရေလှောင်တမံကြီး တည်ဆောက်မယ်လုပ်တော့ ရွာပေါင်းလေးရွာမှ ဆရာတော်သံဃာတော်များဦးဆောင်ပြီး ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာမို့ တားမြစ်ခဲ့ကြတာပါ။
အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ရေလွှမ်းရင် (၁၀)ဆ လျော်မယ် အာမခံခဲ့ကြပါတယ်။
အခုတော့ အာမခံဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဘယ်ရောက်နေပြီ မသိတော့ပါဘူး။
ပြင်သာရွာလိုအပ်ချက်ကို မန်း မ.ဘ.သ က ထောက်ပံ့ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
ရေလွှဲမြောင်းက ထွက်လာသည့် ရေကြောင့် အလယ်တန်း စာသင်ကျောင်းဆောင် ၂ ဆောင်၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနေအိမ်၊ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင်၊ လူနေအိမ် ၇ လုံး မြစ်ရေတိုက်စား၍ ရေထဲမျောပါသွားပြီးဖြစ်။
မြစ်ရေနားနီးသူများ နေအိမ်များမြစ်ရေထဲ မျောပါမသွားခင် နေအိမ်များကို ဖျက်သိမ်းပြီး ရေလွတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေကြ။
မြစ်ရေနှင့် ဝေးသူများ အိမ်မဖျက်ကြသေးပဲ အိမ်တွင်းပစ္စည်းများကို အရင်ရွှေ့ပြောင်းထားကြရ။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း မြစ်ရေထဲ မျောပါမသွားခင် ဖျက်သိမ်းနေကြရပါပြီ။
အခုလောလောဆယ်ရေလွတ်ရာ ရွာမြောက်ဘက် ဘောလုံးကွင်းနှင့်လယ်ကွင်းတွေမှာ ယာယီစခန်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထနှင့် တည်ဆောက်ပြီး နေထိုင်နေကြရ။
မိမိတို့ရဲ့ စပါးတွေကို မိုးလုံတဲ့နေရာမှာထားဖို့နှင့် သယ်ယူဖို့ အကူအညီများလိုအပ်။
မိုးလုံတဲ့နေရာမရှိ မိုးလုံဖို့ မိုးကာများလိုအပ်။
နွားလှည်းများကို အားကိုးပြီး သယ်ယူနေရ။
တစ်ဦးကို အနည်းဆုံး စပါးတင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိ။
တစ်ချို့ စပါး တင်း ၃၀၀ ကျော် ၄၀၀ ခန့်ရှိ။ ၄င်းတွေကို မိုးလွတ်ရာသို့ သယ်ယူဖို့ အကူအညီများလိုအပ်။
မဖျက်သိမ်းသေးသည့် အိမ်များ ဖျက်သိမ်းဖို့ ဖျက်သိမ်းပြီးသည်များကို ရေလွတ်ရာသို့ သယ်ယူဖို့ အကူအညီများလိုအပ်။
ရွာသစ်တည်ဖို့ မြေနေရာရှာနေ။ မိုးရွာမှုရပ်နေ။ မြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျ။
ရွာ၏ ကမ်းပါးကို ရေတိုက်စားမှုမရပ်သေး။
မိုးဆက်လက်ရွာပြီး မြစ်ရေတိုးလာပါက တစ်ရွာလုံး တစ်ခဏချင်း မြစ်ရေထဲ မျောပါသွားနိုင်။
ယခု ကားများသွားလာလို့ မရသေး။
ရွာထဲရှိပစ္စည်းများ ရေလွတ်ရာသို့ သယ်ယူနိုင်ဖို့ ဆည်ပေါ်ရှိကားများမှ ကျောက်ချပေးနေ။
ယခုမြစ်ရေကြီးမှု ကလေးဝ၊ ကလေးမြို့ထိရေဝင်။
ယခုကလေးမြို့ ရေမြုပ်မှုသည် ရာဇဂြိုဟ်ဆည်ကြောင့်ဖြစ်။
ယခု ယာယီပိတ်ထားသည့် ဆည်ဘောင်ရိုးပေါက်ပျက်သွားခဲ့ပါက ဆည်အောက်ရှိရွာများ ဂန့်ဂေါမြို့၊ ကလေးမြို့အပါအဝင် ရေမြုပ်နိုင်။
ရေလှောင်တမံ အမည်-မြစ်သာရေလှောင်တမံ(မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရှည်ဆုံး ကုန်းကျောတမံ)
စတင်ဆောက်သည့်နှစ်-၂၀၀၁ ခုနှစ်(တည်ဆောက်မှု ယခုထိမပြီးသေး)
ယခုဆည်ကြောင့် ပနန်း၊ စံပါယ်၊ ယင်းမာ၊ စင်ပုံရွာ ၄-ရွာ ပြောင်းရွှေ့ရပြီး ရွာဟောင်းများ ရေမြုပ်ပြီး။
kai says: ဆည်ဆောက်လို့.. ရေပိုလွှမ်းတယ်လို့ပြောသူတွေကို.. အံ့သြမိတယ်..
ဆည်ဆိုတာကြီးရဲ့ မူလအလုပ်ကို.. မသိတာလား.. ဗဟုသုတနည်းတာလား.. အစွဲပါနေသလားပေါ့…။
ဆည်ဆိုကတည်းက.. ရေကို ဆည်ထားတာပါ..။
ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ ရေပမာဏထက်ကျော်ရင်.. ထုတ်ပစ်ရမှာကလည်း.. သာမန်လူပြိန်းတွေးတောင်သိနိုင်တဲ့သဘောပါ..။
ဆည်မရှိရင်.. အဲဒီဆည်ထဲ..ဆည်ထားတဲ့ရေထုနဲ့ညီတဲ့ ရေတွေအကုန်.. အဲဒီဒေသအနှံ့မှာ.. ပြန့်ကျဲလွှမ်းကုန်မယ်ဆိုတာကလည်း.. သာမန်လူပြိန်းတွေးတောင်သိနိုင်တဲ့သဘောပါ..။
ရေတွန်းအားကြောင့် ဆည်ကျိုးမပေါက်အောင်.. ခိုင်ခံ့ရမှာက.. တပိုင်းပေါ့…။ ဒါက.. ဆည်ဆောက်အင်ဂျင်နီယာတွေအပိုင်း…။
နောင်နှစ်တွေမှာ.. ရေလွှမ်းမိုးတာမခံချင်ရင်.. အဲဒီရေတွေကို ထိမ်းသိမ်း/ထိမ်းချုပ်ကြရမှာပေါ့..
လူသားစွမ်းအားနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အထဲ.. အကောင်းဆုံးကတော့..ရေတား..ရေဆည်…ရေထိမ်း ဆည်ဆောက်ခြင်းပါပဲ..
မိုးရာသီမှာ ပိုလျှံနေတဲ့ရေတွေကို.. ဆည်ထားကြ..
နွေရာသီမှာ.. ရေထုတ်လွှတ်ပြီး.. စားရေရိက္ခာစိုက်ပျိုးကြ..
ထုတ်လွှတ်တဲ့ရေအရှိန်မှာ.. ဂျန်နရိတ်တာတွေတပ်ပြီး.. လျှပ်စစ်အားထုတ်ယူကြ…
kai says: Nyein Chan Aung
မြန်မာပြည်သို့ အနှစ် ၂၀ ကျော်မှ တခေါက်ပြန်ရောက်၏၊ သူုငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနှင့် မြို့များ တောများသို့ ရောက်လေ၏ အိမ်တော်တော်များများတွင် သာသနာ့အလံများ၊ ၉၆၉ များ ကပ်ထား၏။ လူတိုင်း ဖဲသမားထင်ရလောက်အောင်ပင် ၇၈၆ နှစ်ဆယ့်တစ် ရာစု ကျော်လျှင် မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များ မြန်မာနိုင်ငံကို ကြီးစိုးမည့်အကြောင်းကို ပြော၏။ အလှူအတန်းပေးဖို့ ရွာရောက်လျှင် ရပ်ကွက်လူကြီးများက ဘုန်းကြီးများကို အရင်သိပေးဖို့ ပြော၏ ကျနော်ကား ဘာမှ နားမလည် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ဘုန်းကြီး ပါမပါ ကျနော်မသိ၊ အတူပါလာသည့် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ အဆင်ပြေစေရန် တပည့်တော်တို့ အလှူသပ်သပ်ပါ ဘုရားဟု လျှောက်ထား၏၊ ဘုန်းကြီးကား အခြေခံဥပဒေကို ဖတ်မဖတ် ကျနော်မသိ၊ တရားဥပဒေကို နားလည် နားမလည် ကျနော်မသိ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောမြန်မာနိုင်ငံတွင် မင်းတို့အဖွဲ့မှာ မွတ်စလင်ပါသလားဟု မေး၏။ တကယ်လည်း မပါသောကြောင့် တကြောင်း စကားလည်း ပြောချင်စိတ် မရှိအောင် ရွှံသောကြောင့် တကြောင်း မပါဘူးဟု ပြောကာ ဆင်းလာပြီး လုပ်စရာရှိသည်ကို လုပ်ကြ၏။
နေပြည်တော်သို့ကား ကျနော်မရောက်၊ ကျနော်သွားသော ကျေးလက်များတွင် လမ်းကောင်းတခုမှ မရှိ၊ ကားနှစ်စီး ယှဉ်မောင်းရသည့် လမ်းပင် ခပ်ရှားရှား၊ ကျနော်ရောက်ဖူးသော ထိုင်းနိုင်ငံကျေးရွာများနှင့် ယှဉ်လျှင် ဗမာပြည်သည် မီးကိုတောင် မရှာဖွေနိုင်သည့် ကျောက်ခတ်လူသား သာသာများအဆင့်လောက်တွင်သာ ရှိသေးသည်။ လူတိုင်းတွင် ဖိနပ်မရှိ၊ အိမ်တိုင်းတွင်ပင် ထမင်းစားဇွန်း လုံလုံလောက်လောက်မရှိ၊ ဆားနှင့် သွားတိုက်ပြီး သွားဖုံးတွေ ပျက်ဆီးနေသည့် ကျေးလက်နေပြည်သူများကား၊ ကွမ်းစားက သွားခိုင်တယ်ဆိုပြီး ရှေးလူကြီး သူမတို့၏ စကားများကို မျိုးဆက်အဆက်ဆက် ဖြန့်ဝေတုန်း၊ ကျနော်ကား နားထောင်ခြင်းသက်သက်ဖြင့်ပင် သူတို့ဘ၀တွေအတွက် ရင်လေးမိ၏။ လယ်သမားကူဖို့ ကျနော်တို့သွား၏၊ မျုိးစပါးပေး၊ စက်ပစ္စည်းပေးရုံဖြင့် မရ၊ နွေရာသီတွင် ရေရရန် ချောင်းများဖေါ်ရမည့် အခက်အခဲကို တွေ့ရ၏၊ ရေစုပ်စက် လိုသည့် ကိစ္စများကို မှတ်တမ်းတင်ရ၏၊ အလုပ်သမား ရှားပါးသည့် အကြောင်းအရာလည်း တွေ့ရ၏။ လယ်သမား လုပ်ချင်သည့် လူငယ်များမရှိ၊ ရွာကျန်လူငယ်ဆို၍ ချမ်းသာသည့် မိဘများမှ မွေးဖွားသည့် ကျောင်းသားအချို့နှင့် မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ဒုက္ခိတဟု သတ်မှတ်ထားသည့် လူငယ်များသာ ရှိတော့သည်။ ရာသီကို မှီ၍ အချိန်နှင့် လယ်လုပ်သူတွင် ဖျားခွင့်မရှိ၊ လူစားထိုးရန်မရှိ သဘာဝ အန္တရာယ်ကို အသာထား ကောက်စိုက်သမပင် လုံလောက်အောင် မရှိသော အနေအထားကို လယ်သမားသို့ ကြုံနေရသည့် အနေအထားကို ကျနော်တွေ့လေပြီ။
ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် နိုင်ငံများတွင် အမျိုးဘာသာကို စောင့်ရှောက်ကြသည်ဟု မကြားမိ၊ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနပင် မရှိကြ၊ ယဉ်ကျေးမှု့ ၀န်ကြီးဌာနမှ တဆင့် လိုအပ်သည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်မှု့ပေးကြ၏။ မည်သည့်ဖွင့်ပွဲတွင်မှ ငှက်ပျောပွဲ အုန်းပွဲမတင်၊ ဆုတောင်းခြင်းလည်း မလုပ်၊ ရှန်ပိန် ပုလင်းရိုက်ခွဲပြီး သဘောင်္ရေချသည်ကို ကျနော်မြင်ဖူး၏။ သူတို့ကား အောင်မြင်မှု့ကို အပျော်ဖြင့် ဂုဏ်ယူခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျနော်နားလည်၏။ ဗေဒင်မေးခြင်း ရက်ရာဇာရွေးချယ်ခြင်းလည်းမရှိ၊ စီမံကိန်းကိုသာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆွဲလေ့ရှိ၏။ သုသေသနများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမှားကို သင်ခန်းစာယူ၏။ ကွမ်းသီးလုံးလောက် ဆေးသောက်ဟုမပြော၊ ကိုယ်အလေးချိန်ချိန်ပြီး တိတိကျကျ မီလီဂရမ်များဖြင့် ပြော၍ ဆေးတိုက်၏။ ကျနော်တို့ မြန်မာများကား မိမိမွေးသက္ကရာဇ်ပင် မမှတ်မိကြ၊ စပါးကောင်းသောနှစ်က သူ့ကို မွေးတယ်ဟု ပြောတဲ့သူ ရှိသလို နာဂစ်တုန်းက ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ပေါ့ဟု ပြောသည့်သူကလည်း မရှား။ မြန်မာနိုင်ငံကား အသိပညာပိုင်းတွင် နောက်ကျ ကျန်ခဲ့၏။ စက်နှင့် တနာရီ လယ်ထွန်ရမည့် ခေတ်တွင် တောင်သူလယ်သမားကြီးများက နွားနှင့် ရုန်းပြီး ၂ ရက်လောက် လယ်ထွန်နေကြရ၏။ အသားမာတက်နေသော လက်တို့ဖြင့် မျက်နှာသစ်ကြသည့် ကျေးလက်နေလယ်လုပ်သူတို့၏ မျက်နှာများသည်လည်း ကြမ်းတမ်းလာ၏ ကျနော်ကား ရင်ထဲမချိ၊ သို့သော်လည်း ကိုယ်တိုင်ပင် စစ်အစိုးရခွင့်ပြုမှ ပြန်လာခွင့်ရသော မြန်မာနိုင်ငံဖွားတယောက်သာ။
ကျေးဇူးရှင်လယ်သမားကြီးများ ဟု အသံများကို ကြားရ၏။ လယ်သမား လယ်လုပ်ရင်း ထမင်းငတ်နေသည်ကို ကျနော်တွေ့ရ၏။ ခေတ်အဆက်ဆက်က အစိုးရတို့သည် လယ်သမား လူလို့ပင် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသလားဟု ကျနော်သံသယ၀င်မိ၏။ လယ်သမားတို့ရင်ထဲမှာကား မကျေနပ်ချက် အပြည့်၊ အတိုက်အခံကလည်း လယ်သမားကို ဂရုစိုက်သည် သိပ်မကြား၊ ကျနော်ကား လယ်သမား အသိုင်းအ၀န်းက ပေါက်ဖွားလာသူ ဖြစ်၏။ တိုင်းပြည်သည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၏ ဘာသာတရားများကြောင့်လည်း အကုသိုလ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ အပိုဝင်ငွေရသည့် တိရစ္ဆာန်မွေးဖို့ကလည်း ကိုးကွယ်ယုံကြည်သည့် ဆရာတော်ဘုရားနှင့် အတိုက်အခံဖြစ်မှာမို့ မမွေးရဲသူများကိုလည်း တွေ့ရ၏၊ ဆရာတော်ကား သတ်သတ်လွတ်ဘုန်းပေးသူမဟုတ် အမဲသားကိုပင် တညအိပ် နှပ်ထားမှ မြုံ့ပြီး စားတတ်သူဖြစ်၏။ ကျနော်ဘာမှ မတွေးချင်တော့ အရာအားလုံးသည် နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့်သာ ဆိုင်၏၊ ဆရာစံကို သတိရ၏။ သေနတ်ကို ဓါးဖြင့် အံတု၏။ အဆောင်အယောင်များဟု အယုံသွင်းကာ လယ်သမားတို့ကို မြှောက်ပေး၏။ ကျည်ဆံများကြားတွင် လယ်သမားတို့ ကျဆုံးကျလေ၏။ သို့သော်လည်း မတရားမှု့ကို တွန်းလှန်ရင်း အာဇာနည်အဖြစ် သေကြရ၏၊ ယခုခေတ်ကား လယ်သမားတို့ ငတ်၍ သေနေကြသည်၊ သားတကွဲ သမီးတကွဲ၊ ဖတကွဲ၊ မတကွဲ အကွဲကွဲကြားတွင် အသက်ရှင်နေကြရသည်။
လယ်သမားတို့ ဘ၀ကား မွေးကတည်းက မြေကြီးမှာ ရုန်းကန်ပြီး၊ သေတဲ့အထိ မြေကြီးမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရုန်းကန် လှုပ်ရှား ရှင်သန် နေသွားခဲ့ရသော ဘ၀များကို မကြည့်ချင်၊ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်ကား ကျနော်မမြင်၊ လယ်သမားတို့အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဆရာစံများ လုပ်ဖို့သာ တိုက်တွန်းနိုင်သည့် အနေအထားတော့ ကျနော့်တွင် အခွင့်အရေးရှိသည်။ ထိုကြောင့် လယ်သမားတိုင်း ဆရာစံကဲ့သို့ မတရားတဲ့ အစိုးရကို သူပုန်ထကြဖို့ပဲ တိုက်တွန်းရင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသည့် လယ်သမားများအဖြစ်ပဲ တချိန်မှာ မြင်ဖို့ ဆုတောင်းရင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးး
kai says: ယူအက်စ်မှာ.. အခြေခံဥပဒေကိုစပြင်တော့.. ပထမဆုံးလုပ်ကြတာက.. သောမတ်ဂျင်ဖာဆင်ရေးတဲ့..”wall of separation between church and state”) ပဲ..။ ချခ်ျဆိုတဲ့ ဘာသာရေးဘုရားရှိခိုးကျောင်းနဲ့.. စတိတ်လို့ခေါ်တဲ့..နိုင်ငံကို.. တံတိုင်းခြားခွဲပစ်ရတာပဲ..။
မြန်မာပြည်ရဲ့.. ဒီချုပ်အများစုဖြစ်မယ့်.. လွှတ်တော်ရဲ့.. ပထမဆုံးလွှတ်တော်မှာ.. လည်း.. အဲဒီလိုဖြစ်စေချင်တယ်…။
ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေး ပြတ်ပြတ်သားသားခွဲခြားတဲ့ဥပဒေကို ပြုစေချင်တယ်..။
ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားရေးမဏ္ဍိုင်တွေမှာဝင်ပါရင်.. ဥပဒေအရအရေးယူသင့်တယ်..။ ဒီလိုမလုပ်ရင်.. ဗမာပြည်နွံတိမ်နစ်လိမ့်မယ်..။
ရေက.. ပြန်နှုတ်လို့ရတယ်..သန့်စင်တယ်..။ နွံက.. လှုပ်လေမြုတ်လေ…။ ညစ်ပါတ်မှုပေကျန်တယ်..။
“Separation of church and state” (sometimes “wall of separation between church and state”) isaphrase used by Thomas Jefferson and others expressing an understanding of the intent and function of the Establishment Clause and Free Exercise Clause of the First Amendment to the Constitution of the United States. Since the First Amendment clearly places the restrictions solely on the state, some argueamore correct phrase would be the “separation of state FROM church”. Either way, the “separation” phrase has since been repeatedly used by the Supreme Court of the United States.
The First Amendment to the United States Constitution provides that and Article VI specifies that “no religious Test shall ever be required asaQualification to any Office or public Trust under the United States.” The modern concept ofawholly secular government is sometimes credited to the writings of English philosopher John Locke, but the phrase “separation of church and state” in this context is generally traced toaJanuary 1, 1802 letter by Thomas Jefferson, addressed to the Danbury Baptist Association in Connecticut, and published inaMassachusetts newspaper
Mike says: ယူအက်စ်မှာ.. အခြေခံဥပဒေကိုစပြင်တော့.. ပထမဆုံးလုပ်ကြတာက.. သောမတ်ဂျင်ဖာဆင်ရေးတဲ့..”wall of separation between church and state”) ပဲ..။ ချခ်ျဆိုတဲ့ ဘာသာရေးဘုရားရှိခိုးကျောင်းနဲ့.. စတိတ်လို့ခေါ်တဲ့..နိုင်ငံကို.. တံတိုင်းခြားခွဲပစ်ရတာပဲ..။
.အာဏာရှင်အစိုးရကလည်း ပြည်သူကိုနှိပ်ဖို့ အဲ့အ၀ါတွေကိုပဲ အားကိုးနေတာ :angry:
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီမှာ က ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးတွဲနေတာ နှစ်ပေါင်းကြာပြီ
ဒီက ပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်က တွဲ ထားတာကိုး
kai says: Forecasted river levels (4 Aug)
The Myanmar Department of Meteorology and Hydrology provides near-daily updates on the actual and forecasted water level in the major rivers of Myanmar. The forecasted levels for4August showamixed picture. In the far north, water levels remain high, but are lower in much of the central plains. In the heavily populated areas of Bago, Ayeyarwaddy, and Yangon, water levels vary.
Over3million people live in townships, downstream from river monitoring stations where the water level is above the ‘danger level’. This level, established by the Dept. of Meteorology and Hydrology is the level beyond which, rivers may no longer be able to contain the water, and flooding is likely
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမုတ်သုံလေအားကောင်းရာမှ အား အလွန်ကောင်းနေ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်- တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်းကျရောက်၊ လှိုင်းကြီးနိုင်
kai says: Voice :
ဆိုတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအောင်သူက ဝန်ထမ်းနုတ်ထွက်စာ မရသေးလို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းမှာ မပါဘူး ဆိုတာကရော ဟုတ်ပါသလား။
အဲဒီ ပါမောက္ခတွေနဲ့ ၈၈ က ကိစ္စက မတူဘူး။ ပါမောက္ခတွေကို ချန်ထားတာ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ စောင့်နေတာပဲ ရှိတယ်။ ဒေါက်တာအောင်သူကို စောင့်နေတာပဲ ရှိတယ်။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ အဖြေထွက်ရင် ထွက်ပေါ့။ မထွက်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ၈၈ ကျတော့ သူတို့က NLD ကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဝင်လာတာ။ ဟုတ်တယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သတ်မှတ်ချက်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ လာတဲ့လူ ခုနက ဒေါက်တာအောင်သူတို့လို လူတွေ၊ အဲဒီလို လူတွေက ပါတီက ဖိတ်ခေါ်ရင်တော့ အပေါ်ဆုံးမှာပဲ ဘယ်သူနဲ့မှ ပြိုင်စရာမလိုဘူး။ ဖိတ်ခေါ်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လာတဲ့လူတွေဟာ သူတို့ကို စာရင်းမှာ ပုံမှန်တန်းစီတဲ့ နေရာမှာ Bottom Line (အောက်ခြေ) မှာပဲ။ သူတို့တင်မကဘူး ၈၈ တင်မကဘူး အခုမှ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လာတာရှိတယ်။ သူတို့လည်း Bottom Line မှာပဲ။ အဲဒီ Bottom Line က စပြီး ခုနက ပြောသလိုပဲ အဆင့်ဆင့်ရွေးတော့ ပါချင်လည်းပါမယ် နောက်ပိုင်းမှာ မပါတော့တာလည်း ရှိမယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ Bottom Line မှာ ထားတာက ပယ်တယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။
kai says: http://burmese.voanews.com/content/usdp-party-in-fighting-at-naypyitaw-during-candidate-selection/2915434.html
နေပြည်တော် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဌာနချုပ် လုံခြုံရေးအခြေအနေ ရှုပ်ထွေး
အင်ကြင်းနိုင် 13.08.2015 02:13
နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဌာနချုပ်မှာ မနေ့က ပါတီညီလာခံနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲအပြီး အခြေအနေ တင်းမာမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ဗွီအိုအေက သတင်းရရှိထားပါတယ်။ လုံခြုံရေး ရဲနှင့် စစ်တပ်ကပါ ပါတီဌာနချုပ်ကို ၀ိုင်းရံထားတယ်လို့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပေမဲ့ အတည်ပြုချက် အတိအကျ မရသေးပါဘူး။ သတင်းအပြည့်အစုံကို မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လက်ရှိ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ သားဖြစ်သူ ဦးတိုးနိုင်မန်းကတော့ ည ၉ နာရီလောက်ကစပြီး ဌာနချုပ်ကို အ၀င်အထွက်တွေ ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
kai says: သမ္မတဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ယနေ့ကျင်းပမည်ဟုဆို
4 hours 32 minutes ago Thu, 08/13/2015 – 03:21
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးချုပ်ကို ရဲများဝန်းရံသည်ဟု သတင်းထွက်ပြီးနောက် သြဂုတ် ၁၃ရက် နံနက် ၈နာရီခန့်တွင် သမ္မတဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ အထူးအရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးချုပ်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ အထူးအစည်းအဝေးတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့် ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိမ်းကို ဖိတ်ကြားထားခြင်း မရှိဟု သိရသည်။ သြဂုတ် ၁၂ရက် ညပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရုံးချုပ်ကို ရဲများ ဝန်းရံသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဒုဝန်ကြီးများကို ည ၁၀နာရီခန့်တွင် ဘတ်စ်ကားတစ်စီးဖြင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရုံးချုပ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ည ၁၂နာရီခန့်တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ VIP ကားတစ်စီး ရုံးချုပ်ရှေ့ ရောက်ရှိလာပြီး နှစ်ပေခန့်ရှိသည့် အထုတ်တစ်ထုတ်ကို ဂိတ်ပေါက် လုံခြုံရေးကိုပေးကာ ပြန်ထွက်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးချုပ်ထဲတွင် သြဂုတ် ၁၃ရက် နံနက် ၁နာရီကျော်ကတည်းက တွေ့နေရသည့် အိမ်စီးကားနဲ့ ရဲကားများအနက် ရဲကား ၂စီး နှင့် လူစီးကား ၆စီးခန့်သည် နံနက် ၂နာရီကျော်တွင် ရုံးချုပ်ထဲမှ ပြန်ထွက်သွားကို တွေ့မြင်ရသည်။ နံနက် ၃နာရီတွင် အိမ်စီးကားတစ်ဦး ရုံးချုပ်အတွင်းမှ ထပ်မံ ထွက်သွားသည်ကို တွေ့ရမြင်ရသည်။
ယခု (၀၃:၀၀နာရီ)အချိန်ထိ ရုံးချုပ်ထဲတွင် ရဲကားနှစ်စီးရှိနေတာကို မဇ္ဈိသတင်းထောက်က မြင်တွေ့ရပြီး လူစီးကားတစ်ချို့လည်း ရှိနေပါသေးသည်။ နံနက် ၀၁:၀၀ နာရီခန့်က ပါတီရုံးချုပ်ရှေ့ စစ်ကား သုံးစီးဖြတ်မောင်းသွားပြီး ရဲကား ၄စီးခန့်လည်း ရုံးချုပ်ရှေ့က လမ်းပေါ်တွင် နှစ်ကြိမ်တိတိ ဖြတ်မောင်းသွားခဲ့သေးသည်။
ယင်းအပြင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်အမည်တွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟု ရေးသားထားသော လူစီးကားတစ်စီးလည်း ပါတီရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ရပ်ပြီး ကားပေါ်ရှိ လူနှစ်ဦးက နှစ်ပေခန့်ရှည်သော အိပ်ယာလိပ်ဟု ယူဆရသည့် အထုပ် နှစ်ထုပ်ကို ရုံးချုပ်ဂိတ်ရှိ လုံခြုံရေးများကို သွားရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းထောက် နောက်ဆုံးသတင်းပေးပို့သည့် နံနက် ၃နာရီ အချိန်ထိ ရုံးချုပ်အရှေ့တွင် သတင်းထောက်များ ရှိနေသေးသည်။
– See more at: http://mizzimaburmese.com/article/3167#sthash.UAYEcQUd.dpuf
ဇီဇီခင်ဇော် says: စဉ်းစားကြည့်အူးးးး
သန်းမကြီး – စာဖတ်သူကြီးစကား တသဝေ မတိမ်း နားထောင်သူမို့ သန်းမဂျီးဖြစ်
မအလ – စာဖတ်သူကြီး မွေးစားသားမို့ တပ်ချုပ်ဖြစ်
မန်းမန်း – စာဖတ်သူကြီး ယုံကြည်သူမို့ ဖွတ်ချုပ်ဖြစ် တခြားပါတီ ဝင်လာဖို့ မပြောနဲ့။ သူတို့ ၃ ယောက်တင် ထိုင်ခုံလှည့်လု နေတာ မပြီးသေးဘူးးးး။
ပြည်သူကျွန်ပြုဖို့ အမြင့်ဆုံး နေရာ ၃ နေရာ ရထားတာတောင် ဟိုက မလောက် သေးဘူးးးး
ပြည်သူ့လက်ထဲ အာဏာထည့်ပါမယ် ဆိုတဲ့ ပါတီ ကျ အရိုးများသလေး ချီးခါးသလေး ချေးများနေကြ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: အမတ်လောင်းအခြေအနေ (သြဂုတ် ၁၁ ရက် အထိ)
ပြည်သူလွှတ် အမျိုးလွှတ် တိုင်း/နယ်လွှတ် ပေါင်း
ကြံ့ဖွတ် = ၂၈၆ ၁၅၁ ၅၉၁ ၁၀၂၈
NLD = ၂၃၈ ၁၃၂ ၄၆၇ ၈၃၇
တစည = ၁၈၉ ၉၀ ၄၁၁ ၆၉၀
NDP(နေဇင်လတ်) = ၈၀ ၄၀ ၇၇ ၁၉၇
NDF = ၆၀ ၃၂ ၉၄ ၁၈၆
တောင်သူလယ်ဖွံ့ဖြိုး = ၄၃ ၁၄ ၆၄ ၁၂၁
SNDP(ကျားဖြူ) = ၅၂ ၁၈ ၁၁၄ ၁၈၄
SNLD(ကျားခေါင်း) = ၃၂ ၉ ၆၃ ၁၀၄
kai says: BBC Burmese
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဌာနချုပ်ကို လုံခြုံရေးဝိုင်း
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏ သီရိမြို့ နယ်မှာ ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ) ဌါနချုပ် ထဲကို ရဲနဲ့တပ် အင်အား ၂၀၀ လောက်နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ည ၁၀ နာရီ ခွဲ အချိန်မှာ ၀ိုင်း ထားခဲ့ ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ နေပြည်တော် ကောင်စီ ဥက္ကဌ နဲ့ စစ်တပ် အရာရှိတွေ ပါဝင် တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ကား ၅ စီး ရောက်ရှိ လာပြီး ပါတီ ဌာနချုပ် အတွင်း ၀င်ရောက်သွား တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပါတီဌါနချုပ် အတွင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အစည်း အဝေး လာတက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တချို့ နဲ့ ပါတီ သတင်းစာက မီဒီယာ သမား တချို့ ရှိနေပြီး၊ အဲဒီ မီဒီယာ သမားများတွေကို အပြင် ထွက်ခိုင်း ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပါတီ ဌာနချုပ် အတွင်း လူကြီးပိုင်း ဘယ်သူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ ကိုတော့ အတိ အကျ မသိ ရသေးပါ။
ညနေပိုင်း ကလည်း သူရ ဦးရွှေမန်း အတွက် လုံခြုံရေး တာဝန် ယူထားတဲ့ ရဲမှူးကို ရဲချုပ်မှ ခေါ်ယူ စစ်ဆေး ခဲ့တယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
kai says: Ye Htut
12 hrs · Yangon, Myanmar ·
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှစ်ဦး၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးနှစ်ဦးကိုစစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ပြန်လည် ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလေးဦး၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးလေးဦးနဲ့ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးကို ၎င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒ အလျှောက် နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးကို နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ်သူတက်တက်
စစ်နဲ့ ဖွတ်ထဲက လူဖြစ်နေသရွေ့ ဘာမှ ထူးဘူးးး
သွသူ သတ်သတ် သေသေ ရင်ကို မခုန်တာ။
ပြည်သူတွေ ပယောဂ ဘာမှ မပါဘူးးး
ပေးခဲ့တဲ့ ဒုက္ခတွေကလုံလောက်တာထက် ပိုနေပြီ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုခိုင်ပြောဘူးတဲ့ အခြေအနေ မရောက်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရတော့မယ်ထင်တယ်
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးက နှစ်ဖက်စလုံးမှာရှုပ်ထွေး နေသလိုပါဘဲ
အရင်က အသံထွက်ခဲ့တဲ့ ရဲရဲတောက် ဇာဂနာလည်း ပျောက်နေသလိုဘဲ
kai says: ကိုသူရက.. နေသိပ်မကောင်းလို့တဲ့…။ ဝေဌုကျေ်ကို နောက်ကအကူအညီပေးနေပါတယ်..။
မြစပဲရိုး says: ပြဇာတ်က နေကြတာလား။ တကယ်လား။ မသိတော့။
နည်းမျိုးစုံ သုံးခဲ့တာ ဘာမှ မထိတော့ နောက်ဆုံး ဝှက်ဖဲ ကို သုံးလိုက်တဲ့ သဘောဘဲ။
ကိုယ့် အရည်အချင်း ပေါ် မမှီ ဘဲ နေရာယူထားကြမှတော့ အမှန် အတိုင်း မပြိုင်ရဲ ကြ ဘူး ဆိုတာ သေချာပြီ။
စည်းခြားပြီး သူ့လူ ကိုယ့်လူ ထားတတ် သူ တွေ ဟာ သူတို့ နဲ့ နီးရာ ကို ဘဲ ပိုပိုပြီး စည်းတား သွားတဲ့ သဘာဝ ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အရည်အချင်းရှိ သူ ဖြစ်လဲ သူတို့ စည်း အပြင် ရောက်မှာစိုး သူ တွေ အောက်ကျို့ မြဲ အောက်ကျို့ နေရတော့ မဲ့ အဖြစ်ဘဲ။
စနစ် အပြောင်း လေး တစ်ခု အတွက် ဒီလောက် ခရီးပေါက်ခဲ့ပြီး မှ နောက်ဆုံး ပန်းတိုင်နားမှာ လွဲ ရတော့ မဲ့ နိုင်ငံ ရဲ့ အဖြစ်။ အတော် စိတ်မကောင်းပါ။
မြစပဲရိုး says: . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စိုးရိမ်တယ်။
ဘယ်အချိန်ထိ စောင့်ကြည့်ပြီး လွှတ်ထားမယ် မသိ။ ဘယ်လို အကွက် ကို စောင့် နေတယ် မသိ။
သိပ်တော့ ထိ ရဲ မယ် မထင်လောက်ဘူး မှန်းပေမဲ့ မသိနိုင်ပါ။
အာဏာ ကို အတ္တက ဦးဆောင်ချိန် တရား လက်လွတ် တဲ့ စိတ်ဘဲ ရှိတော့ မယ်။
ဒီ အချိန် ဘာတွေ ကိုများ မက် နေကြတယ် မသိ။ ဘာကို မှ ယူသွားနိုင်ကြတာလဲ မဟုတ်ဘဲကွယ်။
Let us be FREE. Please.. :-((((
ဇီဇီခင်ဇော် says: လွှတ်တော် ခေါင်ချုပ်တောင် ဒီလို ဆွဲစေ့ လို့ ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဆို လွှတ်တော်ကြီးး တစ်ခုလုံးး အတွက် တွေးးရဲစရာမရှိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: ဒီချုပ်က.. ဦးရွှေမန်းကိုဆွဲစေ့ပြီး ခေါ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။
နိုင်ငံရေးတွင်.. ထာဝရမိတ်ဆွေ/ရန်သူမရှိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ပွဲ က သိပ်အဆိုး ကြီး မဖြစ်သေးဘူး တော့ ထင်ရတယ်။
ပိုပိုသာသာ ချဲ့ကား တတ် တဲ့ သတင်း တွေ ဖြစ်ဖြစ် နေ တာ လဲ ဘားမီးစ် နည်း ဘားမီးစ် ဟန် လို့ သာ ထားတော့ မယ်။
ဦးရွှေမန်းကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာမှ ဖယ်ရှားမှု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဖြေရှင်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်များ၏ ပေးပို့တိုင်ကြားမှုများအရ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပါတီ၏ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားသူ ဦးရွှေမန်းကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားရခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ နေရာကို ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦးအား လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖြေရှင်းပြောကြားလိုက်သည်။
“သမ္မတက ပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်လို့ မရတဲ့အတွက် ဦးရွှေမန်းကို ပူးတွဲပါတီဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်လွှဲပေးထားတာ။ အခုက ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက ဦးရွှေမန်းရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအပေါ် တိုင်းကြားလာတဲ့အတွက် အခုလို တာဝန်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းရတာပါ” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပါတီတာဝန်ရှိသူများက မကြာမီအချိန်အတွင်း ထုတ်ပြန်ဖြေရှင်းသွားမည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
kai says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
Alinsett @ Maung Thura says: ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်…
အခု … ဒီကား… Big Game ကြည့်နေတယ်..
Mike says: ::::::::::: Breaking News :::::::::::
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလေးဦးကို နုတ်ထွက်ခွင့်ပြု၊ နှစ်ဦးကို စစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြု
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလေးဦးကို ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှစ်ဦးကို စစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှ ယနေ့ည ၈နာရီသတင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများအား ၎င်းတို့၏ သဘောဆန္ဒ အလျောက် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်သည်-
(၁) ဦးတင်နိုင်သိန်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန (၅)
(၂) ဦးမြတ်ဟိန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
(၃) ဦးခင်ရီ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ၀န်ကြီးဌာန
(၄) ဦးသန်းဌေး ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန
အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအား စစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ပြန်လည် ထမ်းဆောင်စေလိုက်သည်-
(၁) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၂) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်း နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
7 days….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: သြဂုတ်၁၄ရက်နေ့အထိ.. အချိန်ရပါသေးတယ်..
နောက်တခေါက်ဝင်ပြိုင်မယ်သူတွေ.. ဒီရက်ပိုင်းထဲ.. တန်းစီ နှုတ်ထွက်ရမှာပါ…။
တပ်ကထွက်လာသူတွေ ၁၅၀ ရယ်..။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ(ဟောင်း)ဦးရွှေမန်းထိုးခန့်ပေးလိုက်တဲ့.. ၅၀လောက်ရယ်ကြားထဲ.. ၁၀၀လောက် မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်.. ဘုံပျောက်သမို့.. ပြဿနာတက်ကြတယ်ထင်ပါတယ်..။
ဒါမျိုးက.. အခု ဒီချုပ်မှာလည်း..ပါတီနကိုရှိပြီး အောက်ခြေကတက် ကိုယ်စားလှယ်ရယ်။ အပေါ်ကရွေးကိုယ်စားလှယ်ရယ်..။ အချိန်ကိုက်ပေါ်လာတဲ့ ၈၈ရယ်.. ဆုံးဖြတ်ရခက်.. ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါလား..။
ဒီချုပ်ကဦးနှောက်ကောင်းရင်.. တပ်ကို ဒီအချိန်မှာဆွဲစေ့လို့ရကြောင်း…။
မြစပဲရိုး says: Kamayut Media added4new photos.
Yesterday at 6:57am · Edited ·
လာမယ့် ၂ဝ၁၅ရွေးကောက်ပွဲဟာ အရင်ရွေးကောက်ပွဲလို ပါတီတစ်ခုတည်းက အပြတ်အသတ်အနိုင်မရနိုင်ဘူးလို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်အမတ်လောင်းတွေနဲ့ ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဟာ သိမ်မွေ့ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှာဖြစ်သလို ရှုပ်ထွေးမှုရှိတာကြောင့် USDP ရဲ့အမှားကို စောင့်ကြည့်တေးမှတ်ပြီး မသမာတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ဆောင်ရွက်လာနိုင်တာမို့ ဥပဒေနဲ့အညီပဲ ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ သူရဦးရွှေမန်းက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ပါတီအောင်နိုင်ရေးသည် ပထမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ “ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေပါ၊ ကိုယ့်တာကိုယ်လုံပါ။ ကိုယ့်နေရာကိုယ် သန့်ရှင်းစွာ အနိုင်ယူပါ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တာဝန်ခံပါ”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မတည့်ချင်ယောင်ဆောင်ပြိး ဒီဘက်ခွဲထွက်လာ
မသိတော့ လက်ခံ မိ
သူတို့ မှောက်ထားတဲ့ ဖဲ ကို ဒီဘက်က မသိသေးဘူးဆိုတာပါဘဲ
ထပ်ခံကြရအုံးမှာ ဆိုတာကိုတော့ သတိမလစ်စေချင်ပါဘူး
kai says: ကိုယ်စားလှယ် ရုပ်သိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်း ကော်မရှင် ထပ်တင် By ရွှေအောင်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို သြဂုတ် ၁၃ ရက်မှာ ကော်မရှင်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထံ ထပ်မံတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းကို ပါတီဥက္ကဋ္ဌနေရာက ဖယ်ရှားပြီး ထိပ်တန်းပါတီခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်တဲ့နေ့မှာပဲ ကော်မရှင်က ကိုယ်စားလှယ်ရုပ်သိမ်းခွင့် ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်ထံ ထပ်မံတင်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြုစုတင်ပြထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်ထံ စတုတ္ထအကြိမ် ပေးပို့လိုက်တာလို့ အစိုးရသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်က ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို ကော်မရှင်က ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၇ ရက်မှာတကြိမ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၈ ရက်မှာ တကြိမ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၃ ရက်မှာတကြိမ် လွှတ်တော်တင်ခဲ့ပေမယ့် လွှတ်တော်က အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိတာကြောင့် အခုလို ထပ်ပို့ရတာလို့ သတင်းက ဆိုပါတယ်။
သီပေါမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်းက အခု လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ပဋိပက္ခမှာ ဒီဥပဒေကြမ်းကို သုံးချင်လို့ အရေးတကြီး တင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကော်မရှင်က လွှတ်တော်ကို တင်တုန်းက သူတို့ဆီမှာ တိုင်တန်းထားတဲ့ အမှုတွေရှိလို့၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ရှိလို့ဆိုပြီး တင်ခဲ့တာ။ အခုကျတော့ ပါတီတွင်း ပဋိပက္ခ ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဦးသိန်းစိန် ပေါ့၊ အဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေက ထင်ထင်ရှာရှား ဖြစ်လာတဲ့ အခါကျတော့ ဒါအတွက် အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ ပုံစံ၊ အဲ့ဒီလို တွက်မယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။”
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရ မဲဆန္ဒရှင်တွေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိသလို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကလည်း တိုင်တန်းသူရှိရင် စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိတဲ့အတွက် လက်တွေ့မှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဖြုတ်ချခွင့်မရှိ ဖြစ်နေတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းဇော်တို့ကို သူတို့ မဲဆန္ဒနယ်မြေက ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ကော်မရှင်ထံ တိုင်တန်းထားခဲ့ပါတယ်။
kai says: H.E. Thura U Shwe Mann
❖ ပြည်သူလူထု၏ မေတ္တာ၊ စေတနာကို အလေးထား လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး၊ ပြည်သူများ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် ပြည်သူများနှင့်အတူ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
Get up, Stand up …. follow up your right …
………………….. ( Bob Merley ) ……….
…. နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိတဲ့ လူငယ်လူလတ်တစ်ယောက်စီက ကြားခဲ့တဲ့ ကဗျာစာသားလေးပါ ……
မန်း ငမန်း5hrs
kai says: Donald Trump third-party run would likely kill Republicans’ 2016 …
Donald Trump is universally acknowledged as the Republican … Donald Trump has good reason to keepathird-party bullet in his bandolier.
‘The Donald’ hasatrump card up his sleeve: third-party ticket
Christian Science Monitor‎ –2days ago
Donald Trump maintains that he will run third-party if he is ‘not treated fairly.’
kai says: အဲဒီစားပွဲပေါ်က.. အင်္ဂလိပ်စာအုပ်၁အုပ်က..
How Successful People Think: – John C. Maxwell
ကထူးဆန်း says: သူဖြေထား တာတော့ သူ အခြေခံဥပဒေစာအုပ် တစ်အုပ်ကလွဲရင် ဘာမှ မဖတ် … ဆိုတော့ ဒီစာအုပ်က လည်း ဟန်ပြ … ဟ ဟ …
(၁၈-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် သူရဦးရွှေမန်းမှ ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ)
❖ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်သူများ စိုးရိမ်ပူပန်မှု ရှိနေကြတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွင်း လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စရပ်များကို လွှတ်တော်အတွင်း ယူဆောင်လာခြင်း မပြုစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
❖ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလှည့်ကျ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင် ဖြစ်သလို ဤကိစ္စအတွက်လည်း တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို လိုအပ်သလောက်သာ အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စကြောင့် ထပ်မံပြီး ပြဿနာဖြစ်လာအောင်၊ ပြဿနာကို ပိုကြီးထွားအောင် မဖြစ်စေလိုပါ။ နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို တည်ငြိမ်ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းအောင်မြင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ကိုသာ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် လိုလားပါသည်။ ဒီအတွက် ယခုလို ရှင်းလင်းတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ပဏာမ ပြောကြားရပါတယ်။
❖ ဦးဌေးဦး နှင့် ကျွန်တော့်ထံသို့ လိပ်မူ၍ စာတစ်စောင် ရေးသားပေးပို့လာပါတယ်။ ထိုစာတွင် “ယခုအခါ ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း၊ ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုကို မျက်ကွယ်ပြု၍ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ပူးတွဲတာဝန် ထမ်းဆောင်သူ တစ်ဦးတည်း၏ ဆန္ဒအရသာ ဆုံးဖြတ်ပြုလုပ်နေခြင်း၊ ပါတီ၏ရန်ပုံငွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ သုံးစွဲနေခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား လိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊ မူလမဲဆန္ဒရှင်အချို့က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားထားခြင်းတို့ကြောင့် ပါတီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို များစွာထိခိုက်ကျဆင်းစေလျက်ရှိပြီး မကြာမီကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရေးကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်သဖြင့်” ဟူ၍ ဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။ ထိုဖော်ပြချက်ပါ အကြောင်းအရာ၊ အခြေအနေမျိုး ပေါ်ပေါက်စေရန် မိမိအနေဖြင့် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း အလျဉ်းမရှိပါကြောင်း ရိုးသားစွာ တင်ပြလိုပါတယ်။
❖ ထိုကဲ့သို့ ရေးသားဖော်ပြထားသောစာအား ကျွန်တော့်အနေဖြင့် (၁၃-၈-၂၀၁၅) ရက်နေ့က လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစာအား စတင်လက်ခံရရှိချိန်မှစ၍ ယခု စာရေးသားချိန်အထိ ဖော်ပြပါအချက်များ ရေးသားပေးပို့မှုအပေါ်တွင် စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ဒီအတိုင်းသာထားလိုက်ပြီး နောင်မှသာ လိုအပ်ပါက ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ဆွေးနွေးသွားကြမည်ဟု သဘောထားခဲ့ပါတယ်။
❖ သို့ပါသော်လည်း ဤအတိုင်းထားလိုက်ပါက ဥပဒေသဘောအရ ဆိတ်ဆိတ် နေခြင်းသည် ဝန်ခံရာရောက်နိုင်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အမှားအမှန်၊ အကောင်းအဆိုးကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်၍ ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်သောကပူပန်မှုများဖြစ်ရခြင်း၊ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ရင်မအေးဖွယ်ဖြစ်ရခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးစေပြီး၊ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စဉ်းစားသုံးသပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါ၍ ယခုလို တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
❖ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့ညက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဌာနချုပ်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာကိစ္စများကို သိရှိပြီးဖြစ်ကြ၍ အထူးရှင်းလင်း တင်ပြရန် မပြုလိုပါ။
❖ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရေးနှင့် ပြည်သူများကလည်း နိုင်ငံတော်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိစေရေးအတွက် အလေးထား စဉ်းစားသုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မည်သည့်ပြဿနာမှ ပေါ်ပေါက်စေလိုသောဆန္ဒမရှိဘဲ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ပြီး နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ စိတ်အေးချမ်းစွာ ရှိနေမှုကိုသာ လိုလားပါတယ်။ သို့ပါ၍ သက်ဆိုင်သူများနှင့် တာဝန်ရှိသူ များမှ နိုင်ငံအပေါ် မေတ္တာစေတနာထားပြီး ပြည်သူများ ယုံကြည်စိတ်ချစွာနှင့် တရားဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ရရှိနေကြောင်းကို လက်တွေ့ပြသမှုဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရ၊ တရားရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တို့မှ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် အသိပေး တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
❖ သတင်းမီဒီယာများမှလည်း ဤကိစ္စအတွက် အထူးစိတ်ဝင်စားခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိခြင်းကြောင့် ကျွန်တော့်အား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလာမှုကိုလည်း ကြိုဆိုအလေးထားပါတယ်။ ယခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းသည် ဤအချိန်ဤကာလအတွက် ထိုက်သင့်သော ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်လက်ခံပေးကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
ကထူးဆန်း says: ဟိဟိ ..သူကြီးလဲ သတိထား ဦး ။ UK က ပုဂ္ဂို လ် က IT ကြွမ်းတော့ အဲ့ ဒီ့ ဘလောဂါတွေ ဘယ်သူဆိုတာ သတင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုဘဲ ။။
ဘလော့ဂါတွေ အသတ်ခံရမှု၊ ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ လောကီအရေး မရောထွေးဖို့ အယူရှိသူ ဘလော့ဂါ နှစ်ယောက် အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူကေ နိုင်ငံသား တစ်ဦး အပါအဝင် လူ ၃ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
ဘလော့ဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ အဗီဂျစ် ရွိုင်း နဲ့ အနန်တာ ဘီဂျွိုင်း တို့ နှစ်ဦးဟာ အခုနှစ် အစောပိုင်းက ဓားနဲ့ခုတ် သတ်ဖြတ်တာကို ခံခဲ့ကြရတာပါ။ အဲဒီ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ယူကေ နိုင်ငံသား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နွယ်ဖွား တိုဟီဒါ ရာမန်က စီစဉ်ခဲ့တာလို့ ရဲတွေက ပြောပါတယ်။
အိုင်တီ ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ရာမန်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ အဆက်အစပ် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းစာမှာတော့ မစ္စတာ ရာမန်ဟာ စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့ ABT ကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
သူ့ကို ဖမ်းဆီးရမှုကြောင့် အခုနှစ် အတွင်း အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ဂါ ၄ ယောက်စလုံးရဲ့ အမှုအတွက် အထောက်အထားတွေ ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ရဲတွေက ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးနဲ့ လောကီရေးကို တရားဝင် ရောထွေးလေ့ မရှိပေမယ့် ဘလော့ဂါတွေ တိုက်ခိုက် ခံရမှုတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ် ပေးမှုတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ဝေဖန်သူတွေက ပြောပါတယ်။
kai says: ‘Godzilla’ weather pattern may hit California in fall, winter
Friday, 14 Aug 2015 | 10:11 AM ET
Cue the screaming, the pointing, the badly synced exclamation: It’s Godzilla!
Bill Patzert,aclimatologist with NASA’s Jet Propulsion Laboratory, said the system has the possibility of becoming “the Godzilla El Niño.” Its ocean signal, he said, is stronger than in 1997, when the most powerful El Niño on record developed.
kai says: 7Day News Journal added2new photos.
“ဒီအချိန်မှာ မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကြားမှာ ပိုပြီး ခိုင်မြဲသွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော “
‘အန်တီနဲ့ နီးစပ်မှုရှိတဲ့လူတွေက ပါတီတာဝန်တွေကနေ ရုပ်သိမ်းခံလိုက်တဲ့အတွက် အန်တီရဲ့ မဟာမိတ်တွေ လျော့နည်းသွားတဲ့သဘောလို့ ထင်လား ‘ ဟူသည့် ယနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် မေးမြန်းသည့် မီဒီယာများ၏ မေးခွန်းကို
‘မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်သူက မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကြားမှာ ပိုပြီးတော့ ခိုင်မြဲသွားဖို့ပဲ ရှိတာပါ ‘ဟုသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါဝင်သည့် တစ်ရာခိုင်နှုန်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသည့် ပမာဏဖြစ်၍ ၄င်းတို့ပါတီအနေဖြင့် လက်မခံနိုင်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
kai says: Aung San Suu Kyi announces alliance with Shwe Mann
From the section Asia Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi has announced that she will form an alliance with Shwe Mann, the ousted chairman of the governing Union Solidarity and Development Party.
She was speaking as parliament reopened on Tuesday for its last session before November’s national elections.
Last week Shwe Mann was dramatically removed from his position.
Speaking while MPs gathered in the capital Nay Pyi Taw forafinal round of parliamentary meetings before the 8 November vote, Ms Suu Kyi said that Shwe Mann’s dismissal by the president on Wednesday made it clear “who is the enemy and who is the ally”.
She said that her National League for Democracy (NLD) party would work with the “ally”.
Ma Ma says: ဖဘမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ သံပုရာသီးက နှစ်ခြမ်းခွဲလည်း နှစ်ခြမ်းစလုံးချဉ်တယ် ဆိုတာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: ဒဂုံ(မြောက်ပိုင်း)၌ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၁ ဒသမ ၅ သန်း ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ
14 August 2015 09:19(+0630) (7 ရက် ခန့်က)
ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က မင်္ဂလာဒုံမြို့မ ရဲစခန်းမှ လှည့်ကင်းအဖွဲ့သည် မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန် (ဇေကမ္ဘာဝင်း)၊ အိုးအိမ်ခြောက်လမ်းသွား လမ်းမ ပေါ်၌ ယာဉ်အမှတ် 4G/—KIA BONGO ယာဉ်၊ ကွန်တိန်နာအတွင်း မှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၂၆ ဒသမ ၇ သန်း၊ စုစုပေါင်း တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၃၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်၌ 7I/——မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြားနှင့် 1G/ — မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ပြားများ ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး မင်္ဂလာဒုံစက်မှု ဇုန်၊ အမှတ်(၃)လမ်းဆုံ မီးပွိုင့်အနီး တွင်ရပ်ထားသောKIA BONGO အမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ်အား 7I/—- ယာဉ်နံပါတ်ဖြင့် ထပ်မံ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
အဆိုပါယာဉ်များ၏ ယာဉ်ပိုင်ရှင် အမည်ပါလိပ်စာများကို စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ဒဂုံ(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် (၄၃) ရပ်ကွက်၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁၃)၊ နေအိမ်မှ KALA- DAN DELTA DEVELO- PMENT Co.,Ltd နှင့် ပတ်သက် သောစာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်း ဆည်းရမိခဲ့ပြီး လှမောင်၊ အောင်လင်း နှင့် ပြည့်စိုးတို့မှာ တစ်ဦးတည်း ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံစစ်ဆေးပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။
KALADAN DELTA DEVELOPMENT Co.,Ltd ကုမ္ပဏီသည် အမှတ်(၂၂၈) ပဒေသ ရာဇာလမ်း (၄၁) ရပ်ကွက် ဒဂုံ (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၌ရှိပြီး ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့် အဖွဲ့ဝင် ဒါရိုက်တာများမှာ မင်းဦးခိုင်၊ ကျော်အေးလှိုင်(ခ) ခိုင်အောင်စိုးနှင့် ဝင်းလှိုင်(ခ) ဦးဝင်းလှိုင်တို့ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ကုမ္ပဏီ ရုံးချုပ်၊ ကုမ္ပဏီရုံးခွဲနှင့် ၄င်းတို့၏ နေအိမ်များကို သြဂုတ် ၃ ရက် တွင် ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ရာ ၄င်းတို့ မှာ နေအိမ်နှင့်ရုံးများကို သော့ပိတ် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြပြီး ကုမ္ပဏီ ရုံးချုပ်အခန်းအတွင်းမှ ဆာလာအိတ် ငါးအိတ်ဖြင့်ထည့်ထားသော စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြား ၁ ဒသမ ၅ သန်း စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၇၅ဝဝဝ (၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ) ကို ထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
KALADAN DELTA DEVELOPMENT Co.,Ltd. မှ တွေ့ရှိသော စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား များ၏ပြင်ပလက္ခဏာနှင့် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ များသည် မင်္ဂလာဒုံ၌ သိမ်းဆည်း ရမိသော စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား များ၏ပြင်ပလက္ခဏာနှင့် ထုပ်ပိုးမှု ပုံစံများနှင့် တူညီကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး မင်းဦးခိုင် (၂၉ နှစ်)၊ ကျော်အေးလှိုင် (ခ) ခိုင်အောင်စိုး (၃ဝ နှစ်)၊ ဝင်းလှိုင် (ခ) ဦးဝင်းလှိုင် (၃၃ နှစ်)၊ လှမောင်(ခ) အောင်လင်း(ခ) ပြည့်စိုး (၂၆ နှစ်)၊ အေးသန်း (၂၆ နှစ်)၊ သန်းမြင့် (၃ဝ နှစ်)၊ ရွှေသီးမောင်(၂၈ နှစ်)၊ သန်းထွန်း (၂၆ နှစ်)တို့အား မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းနှင့် အမှုမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျက်ရှိ သော ၄င်းတို့အား ဖမ်းဆီးရမိရေး အတွက် ပိတ်ဆို့ရှာဖွေခြင်း၊ ရေဆိပ်၊ လေဆိပ်များနှင့် နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပေါက်များ၌ ရှာဖွေခြင်း၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် သတင်းဖလှယ်စုံစမ်း ရှာဖွေမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
အကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ ကုမ္ပဏီက ကုလားတန်မြစ်ဝ
ကျွန်းပေါ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (Kaladan Delta Development Co., Ltd) တဲ့။
အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းဦးခိုင် ဆိုသူဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ
ကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပုံရပြီး LinkedIn မှာ
တောင် သူ့ အကောင့် ထောင်ထားပါတယ်။ (https://www.linkedin.com/in/marmookhine)
သူ့ LinkedIn အရ Indiana University ကနေတောင် မာစတာ ယူခဲ့သူလို့ ဆိုထားတယ်။ University of Machigan က Double Major ဆိုပဲ။ Peace Maker Co., Ltd. မှာလည်း မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သေးတယ်။
Kaladan Delta Development Co., Ltd က ရေထွက်ပစ္စည်း၊ ပုစွန်တွေကို ပြည်ပကို တင်ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီလို့ ဆိုထားပေမယ့် အခု နောက်ဆုံးမှာတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။
LinkedIn မှာ ရေးထားချက် အရကတော့ Kaladan Delta Development Co., Ltd ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထွန်းနေလင်း အအေးခန်းမှာ ထုပ်ပိုးတာ၊
ထွန်းနေလင်းဟာ EU Certified မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှေ့ဆောင် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
*** ထွန်းနေလင်း Plant & Cold Storage ဟာ အလုံ ဆင်မင်းဝင်းထဲမှာ ရှိတယ်။
*** ထွန်းနေလင်းကုမ္ပဏီဟာ သုံးပွင့်ဆိုင်ကုမ္ပဏီ ( http://thonepwinthsainmarine.com/) ရဲ့ အခွဲတစ်ခု ဖြစ်တယ်။
*** အရမ်း အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက အဲဒီ သုံးပွင့်ဆိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ထွန်းနေလင်း ကုမ္ပဏီဟာ အခု ပြုတ်သွားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးက အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ အရင် မွေးရေ ၀န်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်သိမ်းရဲ့သား ဟိုးတလောက နိုင်ငံတော်ကို အကြွေးဒေါ်လာ ၁၉သန်းကျော် ချေးပြီး ပြန်မဆပ်ဘူးဆိုတဲ့ ဦးမင်းသိမ်း (ခ) ကိုပေါက် ရဲ့ ကုမ္ပဏီ ပါ
credit: Thet Aung Min Lat
ref:lynn bo mjn
kai says: Welcome to the THONE PWINT HSAIN Co., Ltd.
Thone Pwint Hsain Company Limited is situated at No (89/90) Bahosi Estate, Lanmadaw Township, Yangon City in Myanmar. This company was beginning established and founded in 2nd May 2000. Thone Pwint Hsain company Limited (TPH). Is one of the leading manufacture and exporter of frozen fresh water fish in Myanmar. In Thone Pwint Hsain company, through fish farming culture ponds, fish buying centers. Processing plants, Cold Store and Ice making plant, Plastic plant, refrigerate trucks, fresh water fish export can be carried out an one stop service. The main product and exported by our company are fresh water fish . Among these fresh water fish, Rohu, Caltal, Mrigal, Pungush, Tilapia and Puti can be exported. Today, the countries to which these are being exported are Saudi Arabia, Dubai, Jordon, Kuwait, Thailand, China and United Kingdom.
This company is invested by only U Min Thein without foreign investment. As our company, according to our attitude, the price of fresh water fish must be cheap, the quality must be good, packing must be neat and the fish must be arrive at exact time when you wish. We take responsibility to keep our attitudes without fail. Therefore, you can order fish as you wish . We completely believe that we will gain success by joining our hands with yours.
kai says: Marm Oo Khine
Chairman & CEO at KALADAN DELTA DEVELOPMENT CO., LTD.
Current	Kaladan Delta Development Co., Ltd.
Previous	Peace Makers Co., Ltd., Peace Makers Co., Ltd, Everset Corporation Sdn Bhd
Education	Indiana University Bloomington
Kaladan Delta Development Co., Ltd.
November 2014 – Present (10 months)Yangon
KDD isaleading Black Tiger Shrimp Packer in Myanmar
KDD Scope of Operations: Raw mat sourcing, Processing, Packing, Export.
Main Markets: USA, Japan, Hong Kong
Black Tiger Shrimp Traditional HLSO Block Frozen: 4Lb/Blk
Standard Packing:6Blks/Master Carton
(Processed and packed at Htun Nay Lin Processing Plant & Cold Store in Yangon) – Htun Nay Linn Plant is the largest Processing Plant & Cold Store in Myanmar and is one ofafew EU certified facilities in the country.
Black Tiger Shrimp HLSO Blk frozen: 50-80 tons/month from April-November.
Projected Production 2015: 450-600 tons.
kai says: ထေရာဝါဒသမားတွေအတွက်.. အတွေးအခေါ်ကို.. အလွန်(အလွန်)လွှမ်းမိုးနိုင်သောစကားကြီးများအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်..။
လယ်တီဆရာတော်ကြီးဆီကလာတာ.. စကားကြီး ပေါင်း၂ခုရှိပါကြောင်း..။
နွားမေတ္တာစာ နွား တို့ ဆိုရန် ၊ ခွင့်ရှိသည် အမှန်မှာ…
မြန်မာနှင့်ကုလား ၊နှစ်ပြည်ထောင် တိုင်းသားတို့ 
ဖြစ်ပွားသည့် တွက်တာသည် ၊ ငါတို့ မှာသတ္တု
သူတို့ ဘေး သူတို့ ဘိုး ၊ သူတို့ နွယ်တစ်ရိုး
တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး ၊ သူတို့ တိုင် မဆုံး
ဒို့ တစ်တွေ ပုခုံးမှာ ၊ မီးဟုန်းဟုန်း ထမတတ်
ဒို့ လုံ့ လ ဒို့ စွမ်းအန် ၊ ဒို့ အပင်ပန်းခံနိုင်လို့ 
အကုန်လုံး စုချေသည် ။
++ ပါရာဇိကကျပီးသော ဒုဿီလရဟန်းကို ဆဲရေးခြင်းသည် အပြစ်ကြီးသလော?
သာမဏေမှာ လိင်ထိုက်သောအမှုကို ပြုမိသောအခါ သရဏဂုံပျက်၏၊ သာမဏေ
စင်စစ်ပျက်၏၊ သင်္ကန်းဝတ်မှုရှိသေးသောကြောင့် လူကားမဖြစ်သေး။
သာမဏေအရာ၌ပင် တည်သေး၏၊ သင်္ကန်းကိုစွန့်ပစ်မှ လူဖြစ်လေ၏။
ရဟန်းမှာလည်း ပါရာဇိကမှုကိုပြုမိသောအခါ ရဟန်းကောင်းစင်စစ်ပျက်လေ၏။
လူသာမဏေအဖြစ်သို့ကား မရောက်သေး၊ ရဟန်းအရာ၌ပင် တည်သေး၏။
ဘိက္ခုပဋိညာဉ်ကို စွန့်သောအခါမှ ရဟန်းအရာ ပျောက်ငြိမ်းလေ၏။
ဤအရာ၌ ထိုဒုဿီလရဟန်းကို အမူလကပါရာဇိကမှုဖြင့် စွပ်စွဲဆဲရေးမိသည်ရှိသော်
ရဟန်းတို့မှာ ကြီးစွာသောအာပတ်အဖြစ် သင့်ရောက်သည်ကိုထောက်၍
လူသီလ၀န္တကို စွပ်စွဲဆဲရေးမိသည်ထက် ရဟန်းဒုဿီလကို စွပ်စွဲဆဲရေးမှုသည်
အဆများစွာ သာလွန်၍ အပြစ်ကြီးကျယ်ရန် အခွင့်ကို သိသင့်လှပေသတည်း။
အကြောင်းမူကား ဘိက္ခုပဋိညာဉ်ကို မစွန့်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး
ညတ်ကမ္မ၀ါမှုဟူသော ဘုရားစက်ရိပ်၊ တရားစက်ရိပ်၊ သံဃာစက်ရိပ်တို့မှ မလွတ်သေး။
ထိုစက်ရိပ်တို့သည်ကား ထိုဒုဿီလရဟန်းကိုကယ်ဆယ်ဖို့ မဟုတ်ကုန်ပြီ။
ထိုဒုဿီလရဟန်းကိုလည်း အပြစ်လေးသည်ထက် လေးစေဖို့၊
ထိုဒုဿီလအား ပြစ်မှားသောသူတို့ကိုလည်း အပြစ်ကြီးစေဖို့၊
ထိုစက်ရိပ်ကို သိမြင်ကြည်ညို၍ ရိုသေသမှုပြုနိုင်သော သူတို့အားအကျိုးများ
(လယ်တီဆရာတော်၊ ဓမ္မဒီပနီ နှာ- ၂၁၊ ၂၂)
kai says: https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/11949429_10203855655706603_5171056013273933182_n.jpg?oh=4d921795961756bdc838351313a67cff&oe=5675B2B8
kai says: ကြက်ဘ၀…
Chicken Butchery Plant
लौ हेर्नुस मार्केटमा कुखुराको मासु कसरी तयारी अवस्थाम आईपुग्छ??
Posted by बुटवल अनलाइन on Wednesday, September 10, 2014
kai says: Pec Pathein လာမယ့် (၂၀၁၆-၁၇) ပညာသင်နှစ်မှာ စတင်ပြောင်းလဲမယ့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့
“KG + ၅ : ၄ : ၃ စနစ်” ပုံစံကို မိဘများ အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်
P.E.C (Private School) အနေနဲ့ သိရှိသလောက် မျှဝေပါရစေ
ပညာရေးစနစ်သစ် စီမံကိန်းက (၅)နှစ် အချိန်ယူပြီး ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်……. KG + ၁၂ စုစုပေါင်း (၁၃)နှစ် တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး မူလတန်း (၆)နှစ်၊ အလယ်တန်း (၄)နှစ် နဲ့ အထက်တန်း (၃)နှစ် ပါဝင်တဲ့ “KG + ၅ : ၄ : ၃” စနစ် ဖြစ်ပါတယ်…
ပထမတန်းကို Grade-1 ၊ ဒုတိယတန်းကို Grade-2 ၊ စသဖြင့် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်……
ဥပမာ – ယခု (2015-2016) ပညာသင်နှစ် ကဲ့သို့ Grade2သည် ပထမတန်းမဟုတ်ပါ ။ သို့ဖြစ်ရာ ယခုနှစ် Grade 1 တွင်တက်ရောက် နေသူသည် လာမည့် နှစ် (2016-17) ပညာသင်နှစ်တွင် Grade 1 ဟုသာ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး / Grade2တက်ရောက်နေသူ သည် လည်း (2016 -17) ပညာ သင်နှစ်တွင် Grade2ဟုသာမှတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါတယ်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ရေးဆွဲမည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း (၅)နှစ်စီမံကိန်း သတ်မှတ်ပြီး တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် အသီးသီးပြောင်းလဲရေးဆွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်…
2016-17 ပညာသင်နှစ်တွင် KG / Grade 1
2017-18 ပညာသင်နှစ်တွင် Grade2/ Grade 6
2018-19 ပညာသင်နှစ်တွင် Grade3/ Grade7/ Grade 10
2019-20 ပညာသင်နှစ်တွင် Grade4/ Grade 8 / Grade 11
2020-21 ပညာသင်နှစ်တွင် Grade5/ Grade9/ Grade 12
အထက်ပါအတိုင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်အား ( ၅ ) နှစ် စီမံကိန်းချမှတ်၍ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပြောင်းလဲပါက မိမိကလေး၏ ပညာသင်နှစ်/အတန်းနှင့် သင်ရိုးပြောင်းလဲမည့်ပုံစံအား ပူးတွဲဖော်ပြပါပုံအတိုင်း တွေ့ မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
မိဘများ အနေနဲ့ မိမိကလေး တက်ရောက်ရမယ့်အတန်းစနစ်အတွက် ကြိုတင်တွက်ချက် ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် (2016-17) ပညာသင်နှစ်မှာ မိမိကလေး တက်ရမယ့် အတန်းနှင့်သင်ရိုးပြောင်းလဲမှု ကို ဇယားတွင်ထောက်ပြီး ညာဘက်သို့ ဆွဲယူကြည့်ပါ
(2016-17) တွင် KG နှင့် Grade 1 စတင်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားအားလုံးသည် ပြောင်းလဲမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ် အတိုင်း သင် ကြားသွားရမယ်လို့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ်
(2016-17) တွင် Grade2to Grade 10 စတင် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားအားလုံးသည် ပုံပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
(2016-17) တွင် Grade 8 စတင်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများသာ အထက်တန်း(၃)နှစ် Grade 10 , 11 , 12 မှီမည်ဖြစ်ပါတယ်
(2016-17) တွင် Grade9/ Grade 10 စတင် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများသည် အထက်တန်း (၃) နှစ် Grade 10 , 11 , 12 သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်အစီအစဉ်ကို မှီမည်မဟုတ်ပါ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျောင်းသား/သူ မိဘများ ပြောင်းလဲမည့် ပညာရေးစနစ်သစ် စီမံကိန်းအား မိမိတို့ သား/သမီးများ ၏ အတန်းနှင့် ချိန်ကိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရန် သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။